အတှကွေုံ့စုံ – My Blog
အခြိနျက ည ၉နာရီခှဲလုပွီ။ ရနျကုနျ မအူကုနျးရပျကှကျသညျ နလေ့ညျဘကျတှငျ လူစညျကားသလောကျ ညနကျလာလြှငျ လူအသှား အလာက ပွတျလာမွဲဖွဈသညျ။ ၁၂၃လမျးထဲရှိ ‘ထှနျးတောကျ’ ဆေးခနျးထဲတှငျ ဒေါကျတာကိုလတျတယောကျထဲ စာထိုငျဖတျနမေိ၏။ မိုးဖှဲဖှဲရှာနသေညျမို့ ည၈နာရီကြျောလောကျကတညျးက ဆေးခနျးကို လူနာမလာတော့ … ၉နာရီခှဲ ဆေးခနျးပိတျခြိနျအထိတော့ လူနာ မလာလညျး မပွနျသေးပဲ ဆကျထိုငျနတေတျသညျက ကိုလတျ အကငျြ့ဖွဈနပွေီ။ စောသေးလြှငျ ကားလမျးပျေါတှငျကားတှကေ ပွညျ့ကွပျနတေတျသေးသညျမို့ ကားမောငျးရတာ မောငျးလို့မကောငျး။ .. ၉နာရီခှဲနှငျ့ဆယျနာရီကွားထဲလောကျဆိုမှ ကားရှငျးပွီး မောငျးလို့ကောငျး၏ တခါတခါတော့လဲ လူနာမလာပါပဲ ထိုငျနရေတာ ပငျြးစရာကောငျးလှသညျ။
အလုပျမရှိတော့ စိတျတှကေလဲ ဟိုရောကျဒီရောကျ … ။ ဒီနတေ့ော့ ကိုလတျစိတျထဲ ရှာမှငယျရညျးစား နီလာ့ကို ထူးထူးခွားခွားသတိရနမေိသညျ။ .. သူကသာ သတိရနမေိတာပါ … နီလာကတော့ သူ့ကို စိတျကူးထဲတောငျထညျ့တော့မညျမဟုတျမှနျးလဲ သူသိနသေညျ။ ရညျးစားဖွဈပွီးလို့မှ တနှဈမပွညျ့သေးခငျ နီလာ့အမဆေုံးပါးသှားတာ ကြောငျးတကျရငျး သတငျးကွားလိုကျရ၏။ .. စာမေးပှဲတှနှေငျ့လုံးလညျခြာလညျလိုကျနသေော ဆေးကြောငျးသားဘဝမို့ ခကျြခွငျးမပွနျနိုငျသေးပဲ အားပေးစကားတှသော လူကွုံပါးလိုကျ စာထညျ့လိုကျ လုပျနခေဲ့ရသညျ။ .. ဟော ကြောငျးပိတျရကျရောကျ လို့ သူလဲ ရှာပွနျရော သတငျးကောငျးက ဆီးကွိုနပေါတော့သညျ။ .. နီလာတယောကျ သူမ၏ပထှေး ကိုကြျောနှငျ့ အတိအလငျးယူလိုကျကွပွီတဲ့ … ။ ကောငျးပါသညျ .. ကောငျးကွပါပသေညျ။ .. သှားလသေူ အမမေ့ကျြနှာမှမထောကျ .. ။
သူ့မကျြနှာလဲမထောကျ … ဘယျသူ့မကျြနှာမှမထောကျ … လုပျပုံ လုပျပုံ၊ နီလာတို့လုပျခလြိုကျပုံက ကိုလတျဆလံသ သှားရသညျ။ ရှာကိုလညျး အဲဒီကတညျးက ကိုလတျ လုံးဝမပွနျတော့။ ယိုသူက မရှကျပမေယျ့ မွငျသူက ရှကျသညျလေ .. ။ ဘယျလောကျပဲ စိတျနာသညျဆိုဆို ပထမဆုံးရညျးစားမို့ ကိုလတျ နီလာ့ကို မမေ့ရသေး … ။ နီလာ့နှုတျခမျးနှေးနှေးလေးတှေ … နို့အုံထှားထှားကွီးတှေ .. တငျသားအိအိကွီးတှေ .. အိုနောကျဆုံးတော့ ဆှဲအားကောငျးလှသောစောကျဖုတျလေး … တခုမှ ကိုလတျမလေို့ကိုမရ။ .. အငျး ဒါပမေယျ့ ဒါတှအေားလုံးက ခုတော့ သူ့ပထှေးတဖွဈလဲ လငျတျောမောငျကွီး ကိုကြေျာ့အတှကျ အသုံးတျောခံစရာလေးတှသော ဖွဈနပေရေော့မညျ … တောကျ … ။ ကိုလတျတှေးရငျး ဒေါသထှကျလာသဖွငျ့ တောကျပငျခေါကျလိုကျမိသညျ။ .. သူငယျခငျြးတခို့ကြတော့ပွောသညျ၊ .. ကိုကြေျာ့မှာ သူ့ထကျကောငျးကှကျတှရှေိနလေို့ဖွဈမညျတဲ့ … ။
သူလဲ ဒါတှအေစက သိပျတော့နားမလညျ .. ဆေးကြောငျးသားပမေယျ့ စာထဲသာစိတျနှဈထားခဲ့သူမို့ ဒါတှနှေငျ့ နဲနဲစိမျးသညျ။ .. သို့ပမေယျ့ ရညျးစားလူလုခံရပွီးနောကျတှငျတော့ ကိုလတျ မခံခငျြစိတျနှငျ့ ဒါတှေ လိုကျစားလာသညျ။ လိငျတံကွီးထှားစသေော နညျးလမျးမြားရှာသညျ။ .. ဆေးထိုးတာတှဘောတှေ ကတော့ ဘေးမကငျးမှနျး ဆရာဝနျလောငျးပီပီ သူသိသညျမို့ လကျတဲ့မစမျးခဲ့။ .. ဘေးကငျးသော လစေုပျပွှနျတှေ ဘာတှနှေငျ့တော့ စမျးကွညျ့သညျ။ .. ရလဒျက မဆိုးလှပါ။ သူ့ဆိုဒျက ပိုကွီးလာသညျ။ .. သနျမာမှုနှငျ့သုတျထိနျးနိုငျအားလဲ ပိုကောငျးလာသညျ။ နောကျတော့ သူငယျခငျြးတှေ တိုငျပငျပွီး တယောကျဟာပျေါတယောကျ ဂျေါလီတှေ အပွနျအလှနျထညျ့ကွသညျ။ .. သူလဲ သူ့လိငျတံ ကြောဘကျတှငျ ဂျေါလီ၂လုံးထညျ့လိုကျသညျ။ .. ပွောငျးဖူးစတှေ့လေို လြှောကျထညျ့နလြှေငျတော့ ဘေးလဲ မကငျးသလို ခံရသူလဲ လကျလနျသှားမညျမို့ မထညျ့။
၂လုံးလောကျက အနတေျောပါပဲ။ စိတျနာနာနှငျ့ ကိုလတျ ရနျကုနျတှငျ ရညျးစားတှေ ထညျလဲထားပွဈခဲ့သညျ။ ထားလိုကျသော ရညျးစားတိုငျးကလဲ သူ့ဟာကွီးနှငျ့ ဂျေါလီလေးတှကေို တနျးတနျးစှဲ .. ။ အဲ တခုတော့ ရှိသညျ။ .. ရညျးစားက ရညျးစားလိုမနပေဲ ယူဘို့အတငျးအကွပျတိုကျတှနျးလာလြှငျတော့ ကိုလတျ တို့ ဝေးဝေးပွေးတော့သညျ။ .. လူပိုဘြဝနှငျ့ ရသလောကျကဲဦးမညျဟု ကိုလတျ စိတျပိုငျးဖွတျထားသညျ။ .. ဒါတှအေားလုံးကို နီလာ့အစား မိနျးမတှအေပျေါလကျစားခနြေခွေငျး တမြိုးဟု သူ ခံယူထားလိုကျသညျ .. ဆိုငျသလား မဆိုငျသလားတော့ မသိ။ .. ဒီလိုနှငျ့ မနှဈက သူ ဆရာဝနျဖွဈလာသညျ။ .. အလုပျနှငျ့အကိုငျနှငျ့ဆိုတော့ ကဲရတာ ပိုတငျ့တယျလာ၏ သူ့ကွောငျ့ အပိုရြညျပကျြခဲ့ရသူလေးတှလေဲ တျောတျောမြားနပွေီ။ နောကျပွီးသားရအေိုငျတှကေို ခွဝေငျဆေးခဲ့တာတှလေညျး မနဲလှတော့။ .. ဆရာဝနျဆိုတော့ ရှောငျတတျတိမျးတတျတာကော ကံကောငျးနသေေးတာကော ပါမညျပေါ့လေ .. ကိုလတျတို့ ခုထိတော့ ပိုကျဘော မိသညျ့ဘ၀ မရောကျသေး။
ကိုလတျအလုပျက ရနျကုနျအနောကျပိုငျး ဆေးရုံကွီးတှငျဖွဈသညျ၊ .. ကိုယျပိုငျဆေးခနျးကိုတော့ လူနာအရမြားသညျ့ မအူကုနျးဘကျတှငျ ဖှငျ့ဖွဈသညျ။ လူပိုလြူလှတျ ဆရာဝနျဆိုတော့ ဆေးခနျးပတျဝနျးကငျြတှငျ ကိုလတျနာမညျက ရပေနျးစားသညျ။ .. ရှုပျပှသေူအဖွဈလဲ နာမညျထှကျသညျ။ .. သို့ပမေယျ့ မိနျးကလေးမြားထုံးစံအတိုငျး ရှုပျသူပှသေူဟု နာမညျကွီးသူတှဆေို ပိုကပျတတျ ရောတတျသညျ့ အတှကျ ကိုလတျဘေးနားမှာ မိနျးကလေးတှေ ဝိုငျးဝိုငျးလညျနလေသေညျ။ .. ကိုလတျကတော့ အခှငျ့သငျ့လြှငျ သငျ့သလို အခွအေနပေေးလြှငျ ပေးသလို စိတျကွိုကျရာကို ဆှတျခူးစားသုံးရငျး လူပိုဘြဝကို ပြျောပြျောကွီး ဖွတျသနျးနလေတေော့သညျ။ ‘ ဝါး ဟား … ‘ အိပျငိုကျသလိုလိုဖွဈလာသညျမို့ ကိုလတျ သနျးဝလေိုကျမိသညျ။
လကျပါတျနာရီကို ငုံ့ကွညျ့တော့ ကိုးနာရီခှဲလုပွီ။ .. လကျထဲမှ ပလေးဘှိုငျးစာအုပျကို အသာခေါကျသိမျးလိုကျပွီး သိမျးစရာရှိတာတှေ သိမျးနှငျ့ရနျ ကိုလတျ ထလိုကျ၏။ ပုဆိုးအောကျမှ ဖှားဘကျတျောက ပလေးဘှိုငျးစာအုပျအရှိနျနှငျ့တကွှကွှဖွဈနသေညျ ပုဆိုးဝတျလြှငျ အောကျခံဘောငျးဘီဝတျလမေ့ရှိသော ကိုလတျအကငျြ့က တခါတခါတျောတျောဒုက်ခပေး၏။ ခုလဲ ဖှားဘကျတျောငွိမျအောငျ ခနစောငျ့ရသေးသညျ။ နို့မဟုတျ လူမွငျလို့မှ ကောငျးမညျမဟုတျ။ … ‘ ဆရာ .. ဆရာရှိသေးလားဟငျ … ‘ ဆေးခနျးတံခါးတခွမျးပိတျထားလိုကျပွီး အတှငျးဘကျလူနာစမျးသပျခနျးထဲဝငျကာ နားကွပျတှဘောတှေ သိမျးနသေော ကိုလတျနားထဲသို့ ဆညျးလညျးသံလေးတခုတိုးဝငျလာသညျ။ .. ပွနျမညျလုပျခါမှ လူနာက လာနပွေနျပွီထငျသညျ။
ကိုလတျ နဲနဲကှဲမြွီးတိုသှားရ၏။ တခါတခါကြ လူနာတှကေ ဒီလိုပါပဲ .. ဆေးခနျးဖှငျ့ထားခြိနျတောကျလြှောကျကြ လူရှုပျသညျဘာသညျဆိုပွီး လာမပွကွ၊ ဆေးခနျးပိတျပွီး ပွနျတော့မညျဆိုလြှငျ တယောကျပွီးတယောကျ ရောကျရောကျလာတတျသညျ။ ‘ ကိုးနာရီခှဲပွီဗြ .. ဆေးခနျးပိတျတော့မလို့ … သွျော … မီမီ ပါလား .. ‘ ကိုလတျဘုတောသံက တဝကျတပကျြနှငျ့ရပျသှားရသညျ။ ရစေိုနသေောထီးလေးကို ကိုငျထားသညျ့ ခဈြစရာ မိနျးကလေးကို သူကောငျးကောငျးသိသညျကိုး .. ။ လမျးထိပျနားမှ မီမီရယျလေ .. မနှဈကမှ ယောကျြား ဆုံးထားသညျ့ ပူပူနှေးနှေး မုဆိုးမလေး မီမီ။ .. ‘ ဆောရီးနျော ဆရာ … ဆရာနဲ့ သသေခြောခြာတိုငျပငျခငျြလို့ ဆေးခနျးလူရှငျးခြိနျကမြှ ရှေးပွီးလာခဲ့တာ၊ အနှောကျအယှကျပေးမိသလိုမြား ဖွဈသှားပွီလားမသိဘူး .. အားနာလိုကျတာ .. ‘ မီမီက မကျြလုံးလေး ပုတျကလပျပုတျကလပျလုပျရငျး တောငျးပနျနသေညျ။ .. ခှငျ့လှတျပေးရမှာပေါ့လေ။ .. ဒီလောကျလှသညျ့ မုဆိုးမလေးပဲဟာ .. ။ ‘ ရပါတယျ မီမီရယျ … ပွောနရေမယျ့သူတှမှေ မဟုတျတာ … ကဲပွော .. ကနြျောဘာကူညီရမလဲ ‘ ကိုလတျလသေံပွောငျးသှားတော့မှ မီမီ အားတကျသှားရသညျ။
နောကျနမှေ့လာလို့မြား ပွောလှတျလမေလားဟု ဆေးခနျးအလာတလြှောကျလုံး တှေးပူနခေဲ့ရသညျလေ။ .. လကျထဲမှ မိုးရစေိုနသေောခေါကျထီးလေးကို ထီးထညျ့သညျ့ပုံးထဲ မီမီထညျ့လိုကျ၏။ ဘေးဘီကို စိတျမလုံ သလို အသာအကဲခပျသညျ။ ‘ စိတျခသြာ ပွောပါ မီမီ … ဒီနေ့ အကူကောငျလေးမလာလို့ ကနြျောတယောကျထဲရှိတာ .. ‘ ကိုလတျက မီမီ့အနအေထားကို အကဲခပျမိသဖွငျ့ ရှငျးပွလိုကျရ၏။ ခါတိုငျးဆို ကောငျလေးနှငျ့ ကိုလတျ အတူပွနျပွီး လမျးကမြှ ဘတျဈကားမှတျတိုငျတှငျ ခပြေးနကွေ။ ဒီနတေ့ော့ ကောငျလေး သှားစရာရှိလို့ ခှငျ့တိုငျထားသညျမို့ သူတယောကျတညျးသာ .. ။ ကိုလတျစကားကွောငျ့ မီမီ သကျပွငျးလေး အသာခလြိုကျသညျ။ ရှကျရှံ့ဟနျနှငျ့ မကျြလှာလေးခလြိုကျရငျး တိုးတိုးလေး ပွောလိုကျသညျ။
‘ ဒီ .. ဒီလိုပါဆရာ … မီမီ သှေးမပျေါတာ ၂လရှိနပွေီ အဲဒါ .. အဲဒါ .. ‘ ကနျြးကနျြးမာမာ တောငျ့တောငျ့တငျးတငျးနှငျ့ ခဈြစဖှယျ လငျသမေုဆိုးမလေး .. သှေးထိနျနတောကို ရှကျရှကျနှငျ့ပွောနပွေီဆိုမှတော့ တခွားဘာမြားဖွဈနိုငျဦးမှာတဲ့လဲ .. ခိုးစားတာ လူမိလပွေီပေါ့။ ဘာပဲပွောပွော တခွားဖွဈနိုငျခွတှေလေဲ ရှိသေးသညျမို့ ကိုလတျ တာဝနျအရ ရှငျးပွရလသေညျ။ ‘ တခါတခါ ဒီလိုပဲ သှေးထိနျတတျတာပဲ မီမီရဲ့ .. ‘ မီမီမကျြနှာလေး ရဲတကျလာသညျ။ .. သကျပွငျးတခကျြကို ရှိုကျလိုကျရငျး မပှငျ့တပှငျ့လေး ပွောလာပွနျ လေ၏။ ‘ မဟုတျဖူးဆရာ .. မီမီက သှေးသိပျမှနျတာ။ .. ရကျတောငျ လှဲလမေ့ရှိဘူး။ ခုဟာက .. ခုဟာက .. ‘ ‘ ရပွီ .. ဒီလောကျဆို ဆရာနားလညျပွီ .. ။ ကဲပွော .. မီမီဘာဖွဈခငျြလဲ .. ‘ ‘ သှေးပျေါဆေးတှဘောတှေ ထိုးပေးလို့ မရဘူးလား ဆရာ … ‘ ကိုလတျ ခေါငျးကို ခပျဖွညျးဖွညျးခါမိသညျ။ အပွငျလူတှကွေားထဲမှာ သှေးပျေါဆေး သှေးပျေါဆေးနှငျ့ လူသိမြားလှသော ထိုးဆေးတှကေ တကယျတော့ ကိုယျဝနျရှိတာသာဆိုလြှငျ ဘာမှ မတတျနိုငျ။
လူအမြားက နားလညျမှုတှေ လှဲနကွေခွငျးဖွဈသညျ။ ‘ သှေးပျေါဆေးက ကိုယျဝနျမရှိပဲ တခွားအကွောငျးကွောငျ့ သှေးထိနျနတောမြိုးမှ စှမျးတာ မီမီရဲ့ .. ‘ ကိုလတျစကားကွောငျ့ မီမီ နီးရာခုံတခုပျေါ စိတျပကျြလကျပကျြ ထိုငျခလြိုကျမိသညျ။ ‘ အဲဒါမှ ခကျတော့တာပါပဲ ဆရာရယျ … ခုဟာက ကိုယျဝနျရှိတာလို့ မီမီတော့ထငျတာပဲ .. ဟငျး .. ‘ မီမီဝတျထားသညျက လညျပငျးတျောတျောဟိုကျသော တီရှပျလကျတိုကလေး .. ။ ကိုလတျရှတေ့ညျ့တညျ့တှငျ ထိုငျခလြိုကျတော့ လညျဟိုကျကွားမှ ရငျနှဈမှာကှဲကွောငျးလေးက မကျြစိထဲကို ထငျးကနဲ ဝငျလာသညျ။ အသာမိုးကွညျ့လိုကျတော့ နို့အုံအပျေါပိုငျးလေးတှကေိုပငျ မွငျနရေ၏။ စောစော တုနျးက ပလေးဘှိုငျးဖတျထားသော အရှိနျက မသသေေးသညျမို့ ကိုလတျသှေးတှေ ဆူလာသညျ။ ‘ မီမီတကယျတမျးလိုအပျမယျဆိုရငျ တောငျဥက်ကလာဘကျမှာ ကနြေျာ့အသိ ဆရာဝနျမတယောကျရှိပါတယျ။
ဒါမြိုးတှကေို ကူညီနကွေလေ .. ခကျတာက .. ‘ ‘ ခကျတာက ဘာလဲဟငျ ဆရာရယျ .. လုပျပါဦး .. မီမီ ဆရာ့ကို အားကိုးပါတယျရှငျ .. ‘ ‘ ခကျတာက ဒါဟာ တကယျကိုယျဝနျရှိတာ ဟုတျမဟုတျ သခြောအောငျ လုပျရဦးမယျ မီမီရဲ့ .. ‘ ‘ ဆီးစဈကွညျ့ရမှာလား ဆရာ … ‘ ကိုလတျ အသာပွုံးလိုကျမိသညျ။ သူဆငျသော အကှကျထဲတော့ မီမီတယောကျ ဝငျလာလပွေီ။ .. ‘ ဆီးစဈတာက မသခြောလှသေးဘူး မီမီရဲ့ .. သခြောခငျြရငျ အတှငျးပိုငျး စမျးသပျကွညျ့ရမှာ ….. ‘ ‘ အို … ‘ မီမီ့မကျြနှာလေး ရဲတှတျသှားသညျ။ ခေါငျးလေးက ငုံ့ကသြှားရ၏။ ကိုလတျက ဟနျကိုယျ့ဘို့ ဆိုသလို အသာ မှငျနှငျ့မောငျးနှငျ့ ဆကျပွောလိုကျပွနျ၏။ ‘ မီမီရှကျနရေငျ နောကျနမှေ့ မိနျးကလေးဖျောတယောကျယောကျချေါလာပွီး စမျးလေ .. ။
ဒါမှမဟုတျ လဒေီဒေါကျတာ တယောကျယောကျကိုပဲ သှားပွခငျြ ပွပါလား .. ‘ ပွောမယျ့သာပွောလိုကျရသညျ၊ မီမီ သူပွောသလို တကယျသဘောတူသှားရငျ အခကျ ဟု ကိုလတျတှေးနေ မိလေ၏။ .. မုနျ့က ပါးစပျနားရောကျနပွေီမို့ မစားလိုကျရလြှငျတော့ ကိုလတျတို့ ရာဇဝငျရိုငျးရော့မညျ။ ကိုလတျ ဆုတောငျးပွညျ့သညျပွောရမညျ။ မီမီက ခနစဉျးစားသလိုလေးလုပျနပွေီးမှ သကျပွငျးလေးတခကျြ ခရြငျး စိတျကို ဒုံးဒုံးခလြိုကျလေ၏။ ‘ မထူးပါဘူး ဆရာရယျ … ။ ဒါနဲ့ပဲ ရကျတှေ သိပျကွာသှားဦးမယျ။ … ဆရာပဲ စမျးပေးပါတော့ … ‘ ကိုလတျ တံတှေးကို အသာမွိုလိုကျမိသညျ။ စားရကံတော့ ကွုံလပွေီ။ ‘ ကဲကဲ .. လာ။ ဒါဆိုလဲ အခနျးထဲသှားရအောငျ … သွျော … တံခါးကွီးတော့ ပိတျခဲ့မယျနျော … တျောကွာ စမျးနတေုနျး သူမြားတှေ ရုတျတရကျ ဝငျလာမှာစိုးလို့ … ‘ မီမီ့အတှကျ ရတကျမအေးဟနျနှငျ့ ကိုလတျက ဆေးခနျးအဝငျတံခါးကို တဝကျပိတျထားရာမှ အကုနျပိတျ ပဈလိုကျသညျ။
ထို့နောကျတော့ နုနုထှားထှား မုဆိုးမလေးကို ဦးဆောငျကာ အတှငျးဘကျ လူနာစမျးသပျ ခနျးထဲ ဝငျလာလိုကျတော့၏။ မီမီက ခေါငျးလေးငုံ့ရငျး ဆငျမယဉျသာ ဟနျလေးနှငျ့ ကိုလတျနောကျက လိုကျလာသညျ။ အတှငျးခနျးသို့ရောကျလပွေီ။ ‘ ကဲ .. မီမီ တကျ ‘ ကိုလတျက ပွောလဲပွော မီမီ့လကျလေးကိုလဲ အသာဆှဲကာ ကုတငျပျေါတကျခိုငျးလိုကျသညျ။ မီမီ့လကျဖြား လေးတှေ အေးစကျနတော သတိထားမိလိုကျ၏။ ကုတငျက အနညျးငယျမွငျ့သညျမို့ မီမီက တဖကျစောငျးကာ လကျလေးနှငျ့ထောကျပွီးတကျရသညျ။ ခွဖြေားလေးတှကေ အောကျမှ ခုထားသော ခုံလေးပျေါထောကျပွီး တငျပါးကို တစောငျးလှမျးတငျလိုကျရ၏ ကိုလတျက သူ့ဘကျသို့လှညျ့ကာ ကုနျးပွပေးလိုကျသလိုဖွဈသှားသော မီမီ့တငျပါးကွီးတှကေို အားမနာတမျး အနီးကပျကွညျ့ပွဈလိုကျသညျ။ စောစောက မနဲခြိုးနှိမျထားရသော ဖှားဘကျတျောက ရုနျးထလာသညျ။ .. ခုတငျစောငျးနှငျ့ မနဲဖိထားလိုကျရသညျ။ ‘ ဟငျး … ‘ ကုတငျပျေါရောကျပွီးသညျနှငျ့ မီမီက မကျြလုံးလေးမြား အသာမှိတျကာ သကျပွငျးလေးတခကျြ မှုတျထုတျ လိုကျပွနျ၏။
ကိုလတျ အတတျသိလိုကျပွီ … ဒီကောငျမလေးလဲ စိတျတှလှေုပျရှားနပွေီ။ … ဟနျကိုယျ့ဘို့ ဆိုသလို တရှိနျရှိနျတကျနသေော စိတျကို အသာခြိုးနှိမျယငျး လုပျရိုးလုပျစဉျအတိုငျး သှေးပေါငျအရငျ ခြိနျပေးလိုကျ၏။ .. ဒါတောငျ လူကနပေမေယျ့ လကျက မနေ။ .. သှေးပေါငျခြိနျကရိယာ ပွနျအဖွုတျတှငျ ကိုလတျလကျတှကေ မီမီ့နို့ကွီးတှကေို မထိတထိ ပှတျသှားလိုကျသေးသညျ။ မီမီ မသိမသာလေး တှနျ့သှားတာ .. ခွဖြေားလေးတှေ ကုပျကှေးသှားတာ ကိုလတျ သတိထားမိသညျ။ မီမီ့တကိုယျလုံးက ကုတငျပျေါတှငျ ပကျလကျလေးမို့ ရှိုကျကွီးဖိုငယျအသှယျသှယျက မကွညျ့ခငျြ မွငျလကျြသား ဆိုသလို ဖွဈနရေလသေညျ။ .. ကိုလတျကတော့ ကွညျ့ခငျြခငျြကွီးနှငျ့ကို ကွညျ့နခွေငျးပါ။ ‘ ကဲ … မီမီရေ … စမျးကွစို့နျော … မရှကျနဲ့ သိလား … ‘ အာတှခွေောကျတကျလာသညျမို့ ကိုလတျ တံတှေးကို ခနခန မွိုခနြရေ၏။
ဒီစကားလေး ပွောထှကျလာဖို့ မနဲကို အရှိနျယူလိုကျရသညျ။ မီမီကတော့ ဘာစကားမှတောငျ ပွနျမပွောနိုငျရှာ။ … ခေါငျးလေးသာ အနိုငျနိုငျ ညိတျပွလိုကျရသညျ။ ကိုလတျက မီမီ့ထမီအထကျဆငျစလေးကို အသာဖွုတျသညျ။ … မီမီက ဗိုကျလေးရှပျပေးထားပွီး ကိုလတျ ဖွုတျရလှယျအောငျ ကူညီပေးနေ၏။ လူကတော့ မလှုပျ … မကျြစိလဲ စုံမှိတျထားသညျ။ .. အထကျဆငျစလေး ပွုတျသှားလပွေီ။ .. ကိုလတျက အစက မီမီဝတျထားတာ ရိုးရိုးထမီထငျနမေိသညျ။ .. အခု ထကျဆငျဖွုတျလိုကျမှ ခါးတှငျအထကျဆငျစ ခညျြပွီး ဝတျရသော စကပျထမီမှနျး သိရသညျ။ ဟနျကသြညျပေါ့ … အထကျဆငျစ ဖွညျလိုကျသညျနှငျ့ ခါးအကှဲစလေးက ဟထှကျသှားသညျ။ .. ဒါပမေယျ့ မီမီ့တငျပါးကွီးတှကေ ဖှံ့ထှားလှသညျမို့ လှယျလှယျနှငျ့တော့ စကပျထမီလေးက အောကျလြှောခလြို့ မရ။
‘ မီမီ … တငျပါးလေး နဲနဲ ကွှပေးဦးနျော … ‘ ကိုလတျအသံက အဝေးတနရောမှ လာနသေလို မီမီ့နားထဲ ခံစားနရေ၏။ စိတျညှို့ခံနရေသူလို မီမီဘာမှကို ပွနျမပွောနိုငျ။ .. သူပွောသလို ခါးလေးကို အသာပငျ့ကာ သာ တငျပါးကွီးတှကေို ကွှပေးလိုကျမိရသညျ။ ကိုလတျက အလိုကျသငျ့ဆိုသလိုပငျ စကပျထမီလေးကို အောကျဖကျ တဖွညျးဖွညျး ဆှဲခလြိုကျ၏။ ဆေးခနျးလာပွရသညျမို့လားမသိ .. ။ မီမီ့တှငျ အောကျခံ ဘာမှ မဝတျထားပါ။ .. ကိုလတျက စကပျထမီလေးကို ဆှဲခလြိုကျသညျနှငျ့တပွိုငျနကျ မီမီ့ ရတနာလေးက ဝငျ့ကွှားစှာ ဝငျးဝငျးပပ ထှကျပျေါလာပါတော့သညျ။ မဂိုသှေးပါသူမို့လားမသိ … မီမီက အမှေးအမြှငျတှေ ပွောငျနအေောငျကို ရိတျထားသညျ။
မဖွူမညိုအသားလေးနှငျ့ လိုကျလြှောညီထှစှောပငျ မီမီ့ဆီးခုံလေးက မို့မောကျတကျနေ၏။ .. ပေါငျတံထိပျဖြားတှကေတော့ အပွငျအသားအရထေကျကို ပိုပွီး ဖွူဝငျးတောကျပနသေညျ။ … ပွညျ့ပွညျ့တငျးတငျး နှုတျခမျးသားနှဈလှာ အတှငျးဝယျ သာမာနျမိနျးကလေးတှထေကျ သိသိသာသာကွီးကို ပိုကွီးသော အစလေ့ေးက ပွူးထှကျနေ၏ … ။ ကိုလတျကို မကျြစပဈပွ နသေလိုလို .. ။ ကိုလတျက လကျအိတျစှပျလိုကျသညျ။ … အမှနျက ဒါမြိုးစမျးမညျဆိုလြှငျ ပိုးသတျထားသော ရာဘာလကျအိတျ အထူကို စှပျရမညျ။ သို့ပမေယျ့ ကိုလတျက အကွံကွီးနှငျ့မို့ ရိုးရိုး သှေးဖောကျတာတှေ ဘာတှမှောသုံးသညျ့ ရာဘာလကျအိတျအပါးလေးပဲ စှပျလိုကျ၏။ မီမီကတော့ ဘာမှ မသိရှာ … ။ ကိုလတျပွုသမြှ နုတော့မညျ့ပုံနှငျ့ ပြော့ပြော့ကြော့ကြော့လေး လှဲနလေသေညျ။ ကိုလတျက မီမီ့ပေါငျကွားထဲသို့ သူ့ညာဘကျလကျကွီးကို သှငျးလိုကျ၏။ ဘယျလကျကတော့ မီမီ့ခါးကို အသာလှမျးကိုငျထားသညျ။ မီမီက အလိုကျသငျ့ပငျ ပေါငျကွီးတှကေို ကားပေးလိုကျသညျ။
စောစောက ဒူးလောကျရောကျအောငျ ဆှဲခထြားသော စကပျထမီလေးက မီမီ ပေါငျကားပေးလိုကျမှုကွောငျ့ အောကျသို့ တှနျးခလြိုကျသလိုဖွဈကာ ခွဖြေားထိလြှောကသြှားတော့၏။ ကိုလတျ အသကျကိုမှနျအောငျ မနဲထိမျးရှုယငျး မီမီ့ စောကျဖုတျလေးထဲ လကျညှိုးကို စထိုးသှငျးလိုကျ၏ အတှငျးပိုငျးစမျးသပျလြှငျ လကျညှိုးလကျခလယျနှဈခြောငျးပူးနှငျ့ စမျးရမွဲဖွဈသျောလညျး မီမီ့စောကျဖုတျလေးက အပိုနြှငျ့မခွား တငျးကွပျစိရိနသေညျမို့ တခြောငျးထဲနှငျ့ပဲ အရငျ သှငျးလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။ ဒါတောငျမှ ကိုလတျလကျညှိုးက ပုဇှနျကဈြစာတှငျးထဲ ထိုးထညျ့ရသညျ့အလား စီးပိုငျတငျးကွပျနသေညျ။ … ‘ အ …. ‘ မီမီ့နှုတျမှ မပှငျ့တပှငျ့ အသံလေး ပှငျ့အံထှကျလာ၏။ ကိုယျလုံးလေးလဲ ဆတျကနဲ တုနျသှားသညျ။ .. ခါးလေးက မသိမသာ ကော့တကျလာကာ ပေါငျတံကွီးတှကေ ပိုကားထှကျသှားသညျ။ ‘ မီမီ နာသှားလို့လားဟငျ … ‘ ကိုလတျက အမှနျအကနျစမျးသလို မစမျးပဲ လကျညှိုးကို အတှငျးထဲတှငျ ပတျလညျလှညျ့ကလိပေးနရေငျး မသိဟနျဆောငျကာ မေးလိုကျ၏။
ခါးလေးကို ထိနျးကိုငျပေးထားသော ဘယျလကျကလဲ မသိသလိုလိုနှငျ့ အောကျဖကျလြှောဆငျးလာပွီး မီမီ့တငျသား ထှားထှားအိအိကွီးတှကေို အသာဖွဈညှဈဆုပျနယျလာသညျ။ အထိအတှကေ့ ထူးလှ၏။ .. ကိုလတျ စိတျရိုငျးတှေ ပိုဆငျလာသညျ။ ‘ နာရငျပွောနျော … အားမနာနဲ့သိလား … ‘ ပါးစပျကသာ တှကေ့ရာတှလြှေောကျပွောနသေျောလညျး ကိုလတျ လကျတှကေ စနဈတကြ လှုပျရှားလာပွီ၊ လကျညှိုးတခြောငျးထဲထိုးသှငျးထားရာမှ လကျခလယျကိုပါ စဈကူယူလာသညျ။ နှဈခြောငျးပူးဖွငျ့ မီမီ့စောကျဖုတျထဲ ထိုးသှငျးလာသညျ။ .. မီမီ့စောကျဖုတျလေးကလဲ အရညျတှေ စိုရှဲထှကျလာပွီမို့ ကိုလတျလကျနှဈခြောငျးပူးကို မဖွုံတော့ပေ။
ကိုလတျက အပီပငျ လကျတဆုံးထိုးသှငျးလိုကျ .. ပါတျလညျလှညျ့ကာ မှနှေောကျပေးလိုကျ .. ဘေးနံရံလေးတှကေို တဆတျဆတျထိုးဆှလိုကျ .. သားအိမျခေါငျးနရောလေးကို ဖိထိုးလိုကျ လုပျပေးနသေညျ။ မီမီ တဆတျဆတျတုနျလပွေီ … ကိုလတျ ဘာလုပျနပွေီမှနျးလဲ ရိပျမိပွီ။ .. သို့ပမေယျ့ ဘာမှလဲ မပွောသာ .. မရုနျးသာ .. ။ သူမကိုယျတိုငျလဲ အသှေးထဲအသားထဲက ကာမဇောတှေ တရှိနျရှိနျ တကျနရေလပွေီကိုး .. ။ ‘ အား ဟာ့ဟာ့ …. ဆရာ ဆရာ ရယျ … ‘ ကိုလတျက လကျညှိုးလကျခလယျပူးကို အဆုံးထိုးသှငျးဖိထားရငျး လကျမက အဝမှ အစလေ့ေးကို ဆှပေးလိုကျတော့ မီမီ မနနေိုငျတော့။ .. အသံတှပေငျထှကျလာရတော့သညျ။
ခုနက ခပျပြော့ပြော့လေး လှဲနရောမှ ခုတော့ ခွဖေဝါးတှေ ခုတငျပျေါအပွားလိုကျခကြာ တငျပါးကွီးတခုလုံး တထှာနီးပါး မွောကျတကျ လာသညျအထိကို ကော့တငျပေးနတေော့သညျ။ ‘ မီမီ ခံလို့ကောငျးလားဟငျ … ‘ ကိုလတျက ဗွောငျပငျ မေးလာတော့သညျ။ .. အပှဲပှဲနှဲခဲ့ဘူးပွီဖွဈသော သူရဲကောငျးမို့ ဒီတပှဲလဲ သူကောငျးကောငျးကွီး အောငျနိုငျသူဖွဈပွီမှနျး ဗဒေငျမေးစရာမလိုပဲ ကိုလတျ အတတျသိနလေပွေီကိုး … ။ ‘ ကောငျးတယျ ဆရာရယျ … ဘယျလိုကွီးမှနျးကို မသိဘူး … အားရှီး …. ‘ တျောယုံမိနျးကလေးဆို ဒီလောကျနှငျ့ စကားမေးမရတတျသေး။ … မသကာ ခေါငျးလေးညိမျ့ပွယုံလောကျပဲ ရှိမညျ။ .. မီမီကတော့ မုဆိုးမလေးလဲဖွဈပွနျ .. ကာမဇောလဲ ထနျလှသူမို့ ရှကျတာတှေ ကွောကျတာတှေ ခနနှငျ့ လှငျ့စငျပြောကျကှယျသှားလပွေီ။
ကိုလတျက ကကြေနြေပျနပျကွီးကို ပွုံးလိုကျ၏။ .. ရကေနျအသငျ့ ကွာအတငျ့ဆိုသလိုပငျ အပွငျတှငျလဲ မိုးက သညျးသညျးမညျးမညျးရှာလာပွနျသညျ။ … အပွငျကလူတှေ ရောကျလာစရာမမွငျတော့။ .. ရောကျလာလဲ ပိတျထားသော ဆေးခနျးတံခါးကိုကွညျ့ပွီး ဆရာဝနျပွနျသှားပွီပဲမှတျကွမညျ။ ကိုလတျ၏ ကားက ဆေးခနျးအဝတှငျမရပျပဲ ရပျရနျလှယျသော လမျးထိပျနားက မွကှေကျလှတျကွီးရှတှေ့ငျ ရပျထား ခွငျးဖွဈရာ နောကျကွောငျးက အကုနျရှငျးနလေပွေီ။ .. ‘ အမယျလေးလေး … ဆရာ ဆရာရယျ … ဘယျလိုမြားလုပျလိုကျတာလဲရှငျ .. အား ဟားဟား အူး … ‘ ကိုလတျက ဂြီစပေါ့တျ ဟုချေါသညျ့ ဆီးအိမျအောကျနား စောကျဖုတျရှဘေ့ကျနံရံကို အတငျးထိုးဖိကာ ဆှပေးလိုကျတော့ မီမီ ထှနျ့ထှနျ့လူးသှားရတော့သညျ။ … အရညျတှလေဲ ပှကျခနဲကို ထှကျကလြာရာ ကိုလတျ လကျအိတျပျေါမှာပငျ ရှဲအိုငျသှားရသညျ။ … ပွီးရှာလပွေီပေါ့ တခြီ .. မီမီလေးရယျ ။
ကော့တငျပေးထားသော မီမီ့တငျပါးကွီးတှကေ စမျးသပျခုတငျလေးပျေါ ဝုနျးကနဲ ပွနျပဈခလြိုကျသလို ကသြှားသညျ။ .. မီမီခေါငျးလေးကို တဖကျစောငျးကာ အသကျကို မှနျမှနျပွနျရှုနရေ၏။ ဖှံ့ထှားသော မီမီ့နို့ကွီးတှကေ နိမျ့လိုကျမွငျ့လိုကျနှငျ့ လှိုငျးထနရေသညျ။ ကိုလတျကတော့ ဒါကို ကကြေနြေပျနပျကွီး အရသာခံကွညျ့နလေိုကျသညျ။ စောကျဖုတျလေးထဲမှ လကျကိုတော့ မထုတျသေး … မီမီ့စောကျဖုတျလေးက ရှုံ့လိုကျပှလိုကျနှငျ့ ကိုလတျလကျခြောငျးတှကေို ညှဈနဆေဲရှိသေးသညျ။ ခနနတေော့ ကိုလတျ ရှတေ့ဆငျ့တကျရနျ ခွလှေမျးပွငျလိုကျ၏။ မီမီ့ကိုယျလေးကို ခုတငျအောကျဖကျဇောငျးရောကျအောငျ အသာဆှဲခလြိုကျသညျ။ .. မီမီက မကျြလုံးလေး အသာမှေးကာ လှမျးကွညျ့သညျ။ .. ဘာမှတော့ မပွော၊ .. ရုနျးတာကနျတာတှလေဲ မလုပျ။ မီမီ့တငျပါးကွီးတှေ ခုတငျအောကျဖကျဇောငျးပျေါတငျမိတော့ ကိုလတျက ခုတငျစောငျးမှာ မှီပွီးရပျလိုကျသညျ။
မီမီ့ ပေါငျတံကွီးနှဈခြောငျးကို တဈတီတူးထောငျလို အပျေါမွှောကျတငျလိုကျ၏။ … တခြိနျတညျးမှာ ကိုလတျလုံခညျြကလဲ ကှငျးလုံးကြှတျသှားပွီ။ .. ကြောဘကျတှငျ မကျြလုံးလေးနှဈလုံးလို ဖုထှကျနသေော ဂျေါလီလေးနှဈလုံးနှငျ့ ကိုလတျ လိငျတံကွီးက အမဲသားနံ့ရနသေော ကြားကွီးလို အာသာငမျးငမျး ထှကျပျေါလာလတေော့၏။ တဆတျဆတျတုနျနသေောကွောငျ့ မီမီ့တငျသားကွီးတှကေို ထိုးမိထောကျမိဖွဈနသေညျ။ မီမီကတော့ အံတငျးတငျးကွိတျကာ ခုတငျဘေးစောငျးတှကေို သူမလကျလေးတှကေ ခပျတငျးတငျးဆုပျကိုငျ ထားလေ၏။ ကိုလတျ ရှတေ့ဆငျ့တကျလာမှာကို အသငျ့ကွိုလငျ့နသေညျ့အလား … ။ ကိုလတျက ခကျြခွငျးရှမေ့ဆကျသေး …။ လကျအိတျကို ခြှတျပွဈလိုကျသညျ။ … မီမီ့အရညျတှကေ လကျအိတျပျေါတှငျ ရှဲအိုငျသှားသညျဖွဈရာ လကျအိတျအထဲမှ ကိုလတျလကျပငျ အစိုပွနျကာ နူးအိနရေသညျ။
နူးအိကာ အစိုပွနျနသေော ကိုလတျလကျနှေးနှေးကွီးတှကေ မီမီ့ တီရှပျလေးပျေါမှ အုပျကာ ရှရေငျဖွိုးဖွိုး တှကေို အုပျကိုငျလာတော့သညျ။ မီမီ ပါးစပျလေး ဟ သှားကာ ပငျ့သကျရှိုကျသှားမိရ၏။ ‘ အမေ့ … ‘ အောကျဖကျတှငျသာ ကိုလတျ ပှဲကွမျးလိမျ့မညျဟု ထငျထားမိနခြေိနျတှငျ မမြှျောလငျ့ပဲ အပျေါပိုငျးကို တိုကျခိုကျခံလိုကျရသဖွငျ့ အငိုကျမိသှားသော စဈသညျတဦး ပမာ မီမီ အမပေငျ တလိုကျမိရသညျ။ ကိုလတျလကျကွီးတှအေပျေါမှ သူမလကျလေးနှငျ့ ကပြာကယာ အုပျကိုငျလိုကျမိသညျ။ ကိုလတျကတော့ မီမီ့နို့အုံအိအိထှားထှားကွီးတှကေို မညှာမတာပငျ ဆုပျကိုငျညှဈနယျလတေော့၏။ တီရှပျလေးပငျ ပွဲသှားတော့မလား အောကျမရေ့သညျ။
မီမီ နာလဲနာသညျ … ခံလို့လဲ ကောငျးလှသညျ။ .. ကိုလတျလကျကွီးတှပေျေါအုပျကိုငျထားသော သူမ၏ လကျလေးတှကေ ပထမတော့ ကိုလတျလကျကွီးတှကေို ဆှဲဖယျမလိုလိုနှငျ့ နောကျတော့ မသိမသာ ကူညီ ဖိပေးနမေိလြှကျသားဖွဈသှားရသညျ။ .. ကိုလတျကတော့ သူ့လကျအားကော မီမီ ဖိပေးနသေညျ့အားကိုပါ ယူကာ အပီကို ပှဲကွမျးပွဈလိုကျလတေော့သညျ။ ‘ အား … ရှီး … ဟငျး ဟငျး … ‘ အဖြားတကျနသေော လူမမာပမာ မီမီ့နှုတျမှညဉျးသံလေးတှေ တရစပျထှကျလာသညျ။ ရငျဘတျလေးကလဲ ကော့တကျလာသညျ။ .. မီမီဝတျထားသော တီရှပျလေးက ပါးပါးလေးနှငျ့ လညျကလဲ တျောတျောဟိုကျသညျဖွဈရာ ကိုလတျခုလို အပီပှဲကွမျးနတေော့ နို့အုံကွီးတှကေ လညျဟိုကျအပေါကျလေးထဲမှပငျ လြှံထှကျလာတော့မလိုဖွဈနရေ လေ၏။ အတှငျးမှ ဘရာစီယာလေးကလဲ ရငျပုံခှကျတခွား နို့တခွားဖွဈနလေပွေီ။
ကိုလတျက ဒါကိုပငျ အားမရလဟေနျနှငျ့ မီမီ့ တီရှပျလေးကို ခါးအောကျစမှ ကိုငျကာ အတငျးလှနျခြှတျ၏။ မီမီက လကျလေးနှဈဖကျမွှောကျပေးကာ ကိုလတျခြှတျရလှယျအောငျ ကူညီပေးသညျ။ … တီရှပျလေးကြှတျ သှားပွီးတော့ ဘရာစီယာကိုတော့ ကိုလတျက အခြိနျကုနျခံကာ ခြှတျမနတေော့။ .. နို့အုံတှအေောကျမှ ဆှဲလှနျကာ မတငျလိုကျတော့သညျ။ … ဘျောလီမဟုတျသညျ့အတှကျ ဒီလို မတငျလိုကျသညျနှငျ့ပငျ လှတျလှတျကြှတျကြှတျဖွဈသှားကာ နို့နှဈလုံးက အပွိုငျပွူးထှကျလာသညျ။ မုဆိုးမလေးပမေယျ့ ကလေး မမှေးဘူးသေးသညျမို့ မီမီ့နို့သီးခေါငျးလေးတှကေ အပိုလြေးတှလေိုပငျ နီနီရဲရဲလေးတှဖွေဈ၏။ .. ရာဂစိတျမှနျနခြေိနျမို့ နို့သီးခေါငျးလေးတှကေ ခြှနျကော့စူတကျနသေညျ။ … ကိုလတျက မီမီ့ရငျဘတျပျေါခေါငျးတခုလုံးမှောကျခကြာ နို့သီးခေါငျးလေးတှကေို ငုံစုပျကာစို့လိုကျ၏။ ‘ ပွှတျ ပွှတျ … အငျး ဟား …. ‘ မီမီ ကော့လနျတကျသှားသညျ။
ကိုလတျခေါငျးကွီးကိုလဲ လကျနှဈဖကျနှငျ့အတငျးဖိကာ သူမရငျဘတျပျေါဖိတှနျးထားလိုကျမိ၏။ ကိုလတျကတော့ နို့သီးခေါငျးလေးတှကေိုစို့ရာမှ နို့အုံသားကွီးတှပေါ ပါးစပျထဲဝငျနိုငျသမြှ ဝငျသညျအထိ အာကို အားရပါးရဖွဲကာ စုပျသှငျးနပွေနျသညျ။ .. မီမီ့နို့ကွီးတှေ သှေးခညျြဥကုနျပွီလားပငျ ထငျရသညျ။ အာခေါငျထဲဝငျလာသော နို့အုံသား နူးနူးညံ့ညံ့လေးတှကေိုလဲ သှားနှငျ့ မနာ့တနာ ကိုကျခွဈပေးနပွေနျ၏ နို့စို့နရေငျးမှ ကိုလတျ လကျကလဲ အအားမနေ။ .. အောကျဖကျကိုလှမျးပွီး မီမီ့ဆီးခုံလေးပျေါပှတျသပျရငျး အစလေ့ေးကို လကျညှိုးလကျမနှငျ့ ဖိညှပျဆော့ကစားပေးနသေေးသညျ။ ‘ အငျ့ ဟငျ့ဟငျ့ … တျောပါတော့ ဆရာရယျ … လိုးမှာဖွငျ့လဲ လိုးပါတော့ … မီမီခံရခကျလှပွီ .. ‘ ဒီလိုပဲ ဖွဈလာရမညျလေ။ … အနှူးအနှပျတျောသညျ့ ယောကျြားမြိုးနှငျ့တှလြေှ့ငျ အဘယျမိနျးကလေးမဆို ဒီလိုပဲ မနနေိုငျမထိုငျနိုငျ တောငျးဆိုလာရပမေညျပေါ့။ .. ခုလဲ ကိုလတျ မီမီ့ကို အပိုငျခညျြနှောငျလိုကျပွီလေ။
မီမီ့တောငျးပနျသံဆုံးသညျနှငျ့ ကိုလတျ မီမီ့ရငျဘတျပျေါမှ ခေါငျးပွနျကွှလိုကျသညျ။ နောကျသို့ အနညျးငယျပွနျဆုတျပွီး နရောယူသညျ။ .. ဂျေါလီလေးနှဈလုံးနှငျ့ ပနံတငျ့နသေော သူ့လိငျတံကွီးကို လကျနှငျ့ကိုငျကာ တဆဆလုပျရငျး မီမီ့ဆီးခုံလေးပျေါကို ဖတျကနဲဖတျကနဲ သုံးလေးခကျြ ရိုကျပေးလိုကျသညျ။ .. ‘ အာ့ အာ့ ….. ‘ မီမီဖတျြဖတျြလူးသှားရရှာသညျ။ ကိုလတျဟာကွီးက သူမအစလေ့ေးကိုပငျ လာရိုကျမိသဖွငျ့ ပွီးလုလုပငျ ဖွဈသှားရပွနျသညျ။ ကိုလတျသာ နောကျထပျ ဆကျရိုကျပေးနလြှေငျ တကယျပငျ ပွီးသှားလောကျသညျ။ သို့ပမေယျ့ ကိုလတျက ဆကျမရိုကျတော့ .. ။ သူ့ဟာကွီးကိုသာ လကျနှငျ့အသာထိနျးကိုငျကာ မီမီ့စောကျဖုတျလေးထဲ တသှေ့ငျးလိုကျတော့သညျ။ ‘ ရှီး … အား လားလား … ‘ လိငျတံကွီးကြောဘကျမှ ဂျေါလီလေးနှဈလုံးက မီမီ့ ဂြီစပေါ့တျကို ကကြနြန ဖိနှိပျပှတျတိုကျသှားသညျ။
ရထေဲမှ ကုနျးပျေါသို့ ဆှဲတငျခံလိုကျရသော ငါးကလေးလို မီမီ ပါးစပျလေးဟကာ အသကျငငျသလို ဖုတျလှိုကျဖုတျလှိုကျလေး ဖွဈသှားရလေ၏။ … တကိုယျလုံးလဲ တုနျတကျသှားသညျ။ တခြိနျတညျးမှာပငျ ကိုလတျလီးခြောငျးကွီးတခုလုံးက အတှငျးထဲထိ နကျနကျရှိုငျးရှိုငျး အတငျးဖွဲကာ ထိုးဝငျလာတော့သညျ။ အဆုံးရောကျတော့ သားအိမျခေါငျးလေးကို ဒုတျ ကနဲ တိုကျမိသှားသညျ။ … မီမီမှာ ကိုယျဝနျ ၂လရှိနသေညျမို့ အတှငျးသားလေးတှေ သားအိမျခေါငျးလေးတှကေ နုဖတျနသေညျ။ မိနျးကလေးမြား ဒီအခြိနျတှငျ လိုးလို့အကောငျးဆုံးဖွဈ၏။ လိုးဖူးသူမှ ဒါကိုသိကွမညျ။ .. ကိုလတျကတော့ အတှအေ့ကွုံစုံနပွေီမို့ ဒါကို ကောငျးကောငျးသိသညျ။ .. သိသညျ့အတိုငျးလဲ သသေခြောခြာကို ခံစားကာ လိုးလတေော့သညျ။
မကျြစိတှကေိုပငျ မှေးထားကာ မီမီ့ စောကျဖုတျအတှငျးသားလေးတှေ၏ အထိအတှကေို့ အပီအပွငျ ခံယူနသေညျ။ ခပျကွမျးကွမျးပငျ မဆောငျ့ပဲ ဖွညျးဖွညျးလေး သာသာလေး ထုတျလိုကျသှငျးလိုကျ .. စိမျပွီးနှပျထားလိုကျ လုပျနသေညျ။ … ကိုလတျ က ဒီလိုလုပျနလေေ မီမီကတော့ အာသာမပွစှောနှငျ့ ဖတျြဖတျြလူးလာလပေါပဲ။ … ကိုလတျရဲ့ထိခကျြတှမြေား ပိုပွငျးလာလိုလာလငွေားနှငျ့ အောကျကနေ သူမဖငျဆုံကွီးကို အစှမျးကုနျ ကော့ပငျ့ဆောငျ့မွှောကျပေးနသေညျ။ .. ကိုလတျသိသညျ၊ .. မီမီ ဘယျလိုမှ အဆာမပွဖွေဈနရေပွီ။ .. အမှနျကတော့ စောကျဖုတျ အတှငျးသားလေးမြား၏ နူးညံ့သညျ့အထိအတှကေို့ ဆကျခံစားနခေငျြသေးသျောလညျး မီမီ့အလိုကိုဖွညျ့ပေးဘို့ကလညျး တာဝနျရှိသေးသညျမို့ ကိုလတျ ဗူဟြာပွောငျးလိုကျရသညျ။
မီမီ့ဖငျဆုံကွီးအောကျသို့ လကျလှိုကြာ တငျသားအိအိကွီးမြားကို လကျနှငျ့ကကြနြန ဆုပျကိုငျလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ မီမီ့ခွနှေဈခြောငျးကို သူ့ပုခုံးပျေါထမျးလိုကျကာ ခါးအားကော တကိုယျလုံးအားပါထုတျသုံးပွီး ခပျပွငျးပွငျး ဆောငျ့ခပြေးလိုကျလတေော့သညျ။ … ‘ ဖုံး ဖုံး … ဖုံးဖုံး … အ အ .. အ အ … ‘ မီမီတယောကျ ခုမှပဲ အာသာပွတေော့သညျ။ .. ကိုလတျဆောငျ့လိုကျတိုငျး စမျးသပျခုတငျလေးက တအိအိလှုပျခါနသေလို မီမီ့တကိုယျလုံး အထူးသဖွငျ့ နို့ကွီးတှကေ ရမျးခါနရေသညျ။ .. ကိုလတျက မကွညျ့ရကျဟနျနှငျ့ မီမီ့ နို့ကွီးတှကေို လကျနှငျ့အသာ လှမျးကိုငျကာ ထိနျးထားပေးလိုကျတော့ မီမီ့လကျက ကိုလတျလကျကွီးတှပေျေါထပျကိုငျရငျး အတငျးပဲ ဖိညှဈနသေညျ။ ဒီတော့လဲ ကိုလတျလဲ မနသောတော့ ..။
အသားကုနျဆောငျ့ကြုံးရငျးမှ လကျတှကေပါ နို့ကွီးတှကေို ဖွဈညှဈဆုပျနယျပေးနမေိရတော့သညျ။ … နာရီဝကျလောကျကွာတော့ မီမီ့တကိုယျလုံး တဆတျဆတျတုနျတကျလာကာ စောကျဖုတျလေးထဲမှ အရညျတှေ ဒလဟော ပနျးထှကျသှားရပွနျသညျ။ … နောကျတခြီ ပေါ့ … ။ မီမီ ပွီးသှားပွနျပွီမှနျး သိတော့ ကိုလတျက ဆောငျ့ခကျြတှကေို နှေးပေးလိုကျသညျ။ မီမီ့ ကြိနျးစပျနသေော အတှငျးသားလေးတှကေို ခံသာနိုငျယုံ ခပျသာသာလေး ဆကျဆောငျ့ပေးနရေငျး ခုမှ စကားတှေ ဖောငျဖှဲ့ဖွဈတော့၏။ ‘ ဆရာလုပျပေးတာ ခံလို့ကောငျးလားဟငျ … မီမီ … ‘ မီမီက နှုတျခမျးလေး စူလိုကျသညျ။ မကျြစောငျးလေးပါ ထိုးပဈလိုကျ၏။ ‘ တျောပါ .. လူကို စမျးသပျမယျလေး ဘာလေးနဲ့ ညာပွီး လုပျတယျ … ဟငျး ဆရာ လူလညျကွီး ..
‘ ‘ အို … ဒါ စမျးသပျတာ မီမီ ရဲ့ .. သိဖွငျ့မသိပဲနဲ့ .. ‘ ‘ တျောပါ … စကားတတျတိုငျး … ‘ ‘ အဟုတျပွောတာ … ကိုယျဝနျရှိကာစ မိနျးကလေးတှမှော ဟျောမုနျးအပွောငျးအလဲတှကွေောငျ့ အတှငျးသားလေးတှကေ နဂိုကနဲ့မတူပဲ အရမျးနုသှားတာ … ဒါကို ဆရာက အာရုံခံကွညျ့တာလေ .. ‘ ‘ ပွောပါ … ပွောပါ … သူပဲပွောပါတော့ … ‘ ‘ သွျော … မယုံရငျလဲနေ။ … ခုဆို မီမီ့မှာ ကိုယျဝနျရှိနတော ဆရာသိပွီ … ‘ ‘ ရှငျ ….. တကယျ …. ‘ ဒါတော့ မီမီ တကယျထိတျလနျ့ သှားရသညျ။ ‘ တကယျပေါ့ … အထဲမှာ နူးအိနတောပဲ။ ဒါမြိုးဖီလငျကို ရိုးရိုးမိနျးကလေးတှမှော ဘယျလိုမှ မရဘူး .. ‘ ‘ ဟယျ … ဒါဆိုရငျတော့ ခကျတာပါပဲ ဆရာရယျ … မီမီကိုယျဝနျရှိလို့မဖွဈဖူး … အလိုလိုကမှ ဘိုငျကွီး အမြိုးတှကေ မီမီ့ဆို အပွဈပွောခငျြနကွေတာ .. ‘ ဘိုငျကွီး ဆိုတာက မနှဈက ဆုံးသှားသော မီမီ့ယောကျြား ဘူတားကွီးကို ဆိုလိုမှနျး ကိုလတျသိသညျ။
အနှီ ဘူတားကွီးဆုံးသှားတော့ မီမီ့အတှကျ ကနျြခဲ့သော အမှအေနှဈတှကေ နဲတာမှ မဟုတျတာလေ။ … အမြိုးတှေ လကျညှိုးထိုးခငျြနကွေမညျပေါ့။ … ဒါမြိုးက ဖွဈတတျပါသညျ။ ‘ ဆိုပါဦး …. လကျသညျက ဘယျသူလဲ ။ တယောကျထဲကော ကရဲ့လား … ‘ ကိုလတျ မေးခှနျးက ရိုကျပေါကျ … ။ မီမီ သူ့ကို စှဲပွီမှနျးသိလို့သာ မေးရဲတာ။ … ‘ အောငျမယျ .. အောငျမယျ ဆရာနျော … လူကိုမြား ဖငျလြှောကျဆော့နတေဲ့ အစားထဲကမှတျလို့လား .. တယောကျထဲရှငျ့ … အိမျက ကားတှကေို ဝယျရောငျးလုပျပေးနတေဲ့ ရာရှဈနဲ့ … ‘ မီမီ့ဆီမှာ ဘိုငျကွီး ထားသှားသညျ့ ကား သုံး/လေးစီးရှိပွီး အဲဒါတှကေို ဝယျရောငျးလုပျတာနှငျ့ပငျ ဝငျငှေ ဖွောငျ့နမှေနျး ကိုလတျ ကွားဘူးသညျ။ … သွျော .. စီးပှားရေးအတှကျ စိတျခရြအောငျ လူယုံမှေးတာကိုး။
ရာရှဈကို ကိုလတျ မကျြမှနျးတနျးမိသညျ … ဒီကောငျ ကံကောငျးလစှေ။ … ‘ ဘယျနှဈခြီလောကျ ရှိနကွေပွီလဲ … နတေို့ငျးပဲလား … ‘ မီမီက ခံနရေငျးမှ ကိုယျလေးကွှကာ ကိုလတျရငျဘတျကွီးကို လကျသီးဆုပျလေးနှငျ့ လှမျးထုသညျ။ ‘ ပွောလကေဲလဖွေဈနပွေီ … ဘယျကလာ နတေို့ငျးရမှာလဲရှငျ့ … ဟိုတလောလေးကမှ တခါနှဈခါကွုံမိတာ … ကံမြား မကောငျးခငျြတော့ သှေးက တနျးကို ထိမျသှားတော့တာ .. သိပွီလား ကဲ ‘ ကိုလတျ ပွုံးသှားရသညျ။ … ဒါဆို သူလဲ ကံထူးရှငျပဲပေါ့။ .. ‘ ကဲပါ … ဆရာလုပျနတောနဲ့ စကားတောငျ ဘယျရောကျသှားမှနျးမသိဘူး … မီမီ ဘယျလိုလုပျရမလဲ .. ‘ ‘ အငျး …….. ‘ ကိုလတျက စဉျးစားနဟေနျနှငျ့ ခန တှနေသေညျ။ … ဒီ မုဆိုးမလေးကို စိတျခရြသညျ့ဆီ လှတျမှဖွဈမညျ။ မလုပျပေးပဲ ထားလို့လဲမဖွဈ။ … ဗိုကျကွီးလာလို့ ပွသနာရှုပျလာလြှငျ သူလဲ ပါနပွေီမဟုတျလား။ ….. တျောကွာ ငါးတကာ ယိုသညျ့ခြေး ပုဇှနျခေါငျးလာစုနမှောမြိုးတော့ ကိုလတျ အဖွဈမခံနိုငျ .. ။ ‘ ဒီလိုလုပျလေ မီမီ ရဲ့ … တောငျဥက်ကလာက မတ်ေတာလမျးကို သိတယျမဟုတျလား …
‘ ‘ အငျး သိတယျ … ‘ မီမီက အသာမှိနျးခံနရေငျး ခေါငျးလေးညိမျ့သညျ။ ကိုလတျကလဲ စကားသာပွောနတော ခပျမှနျမှနျဆောငျ့ ပေးနတောကိုတော့ အပကျြမခံ .. ။ ‘ အဲဒီလမျးပျေါမှာ မွငျသာဘကျရောကျခါနီးကရြငျ ကာတျောလိပျဆေးရုံဆိုတဲ့ အမြိုးသမီးနဲ့ ကလေးဆေးရုံ ရှိတယျလေ … ‘ ‘ ဟယျ … အစိုးရဆေးရုံက ဒါတှေ လုပျပေးတယျလား … ‘ ‘ အာ ….. မဟုတျပါဘူး။ စကားကို ဆုံးအောငျနားထောငျပါဦးလေ … အဲဒီဆေးရုံဟိုဘကျကို ဘတျဈကား ၂မှတျတိုငျလောကျကြျောလိုကျရငျ အဝရော ဆေးခနျးဆိုတာ ရှိတယျ .. ထိုငျတာက လဒေီဒေါကျတာ …. ဆရာဝနျမ … ‘ ‘ အဲဒီတော့ … ‘ ‘ အဲဒီတော့ … မီမီ အဲဒီကိုသှားလိုကျပေါ့။ .. ဆရာ လှဲစာရေးပေးလိုကျမယျ။ ဆရာဝနျကိုယျတိုငျလုပျတာ ဆိုတော့ ပိုးဝငျမှာတှေ ဘာတှေ စိတျပူစရာမလိုဘူး။ … စိတျခရြတယျ … ‘ ‘ ဆေးရုံတှဘောတှမြေား တကျနရေဦးမှာလား ဆရာရယျ …..
‘ ‘ မလိုပါဘူး မီမီရဲ့ … မနကျသှား .. နလေ့ညျပွီးပွီ …. လိုအပျရငျနောကျရကျတှေ ထပျချေါလိမျ့မယျ … ဟိုရောကျရငျ မီမီတှပေ့ါလိမျ့မဗြား … ဟော့တျရှော့တျလေးတှေ ဝငျလာမစဲ တသဲသဲ ဖွဈနကွေတာ .. ‘ မီမီက ကိုလတျ ဗိုကျခေါကျကွီးကိုလှမျးလိမျဆှဲလိုကျသညျ။ ‘ ဟငျး … ဆရာက ဒါတှေ ကြှမျးနပွေီပေါ့လေ … ‘ ‘ သွျော .. ဒီလိုပဲ လလေ့ာထားရတာပေါ့ …. ဒါမှ သူငယျခငျြးတှဘောတှေ ကွုံရငျ လမျးညှနျနိုငျမှာလေ ‘ ‘ တျောပါ … ယုံမယျ အားကွီးကွီး … ကဲ … မပွီးနိုငျသေးဘူးလား … မီမီတောငျ နောကျတခါ ပွီးခငျြလာပွီ … ထိနျးနိုငျတာကလဲ လှနျရောပဲ … ။ ခတြာခပြွီးရငျ လှဲစာလဲ ရေးပေးဦး … ဟှနျး ‘ မီမီက မူနှဲ့နှဲ့လေး ပွောသညျ။
ခဈြစရာဟနျလေးတှကေို ကွညျ့ပွီး ကိုလတျ နှမွောနမေိ၏။ နောကျဆို သူမက သူ့ဆီ လာကုနျးခငျြမှ ကုနျးတော့မှာလေ။ .. ‘ ဖွညျးဖွညျးပေါ့ မီမီရယျ … နောကျ ၂ရကျ/၃ရကျနမှေ ဆရာရေးပေးမယျ … ‘ ‘ ဟယျ … အဲဒါနဲ့ပဲ ရကျတှကွောကုနျပွီး လုပျရခကျတော့မှာပဲ … ဘာဖွဈလို့တုနျး ဆရာရဲ့ … ‘ ‘ စိတျမပူပါနဲ့ မီမီရဲ့ … ခုမှ ၂လရှိသေးတာဟုတျလား။ .. ၃လလောကျအထိကတော့ အဲဒီ အမ က အေးအေးဆေးဆေးပဲ … ‘ ‘ ခုရေးပေးလိုကျလဲ ပွီးရော ဆရာရယျ ….. အလကား အရဈရှညျနတေယျ … ‘ ‘ အို … ခုရေးပေးလိုကျလို့ ဘယျဖွဈမလဲ မီမီရဲ့ … ‘ ‘ ဘာလို့ …. ‘ ‘ ဒါမြိုးလုပျလိုကျတယျဆိုတာက ကိုယျဝနျပကျြကသြလိုပဲလေ … လုပျပွီးရငျ ၄၅ရကျတော့ ရှောငျရမှာ … ‘ ‘ ဟငျ … အဲဒါနဲ့ ဘာဆိုငျလို့လဲ …
‘ ‘ ဆိုငျပါသျောကောကှယျ …. ဟောဒီက ဆရာက မီမီလေးကို လုပျလို့ဖွုတျလို့ မဝသေးဘူးဗြ … ထပျလိုးခငျြ သေးတယျ … သိပွီလား … ‘ ‘ ဟယျ … ကွညျ့စမျး ကွညျ့စမျး … အပွောရဲလိုကျတာ … သူ့ကိုမြား ဘယျသူက ခံဦးမယျ ပွောနလေို့လဲ’ မီမီ မကျြနှာလေး နီရဲသှားသညျ။ .. ‘ မပွောလဲ သိပါတယျကှယျ … ဆရာ့ဟာကွီးကို မီမီစှဲသှားပွီမဟုတျလား … ‘ ‘ ဟှနျး … သူပဲ အပွောကောငျး … အ အ … အငျ့အငျ့ … ‘ မီမီက မကျြလုံးလေးဒေါငျ့ကပျပွီး ခဈြစဖှယျပွောလိုကျရာ ကိုလတျရငျထဲ ကလိကလိဖွဈသှားပွီး ကာမအားတှေ အဆမတနျတိုးလာကာ စကားဆကျမပွောတော့ပဲ အဆကျမပွတျ ခပျကွမျးကွမျးပွနျဆောငျ့လိုး လတေော့သညျ။ မီမီလဲ ကိုလတျဆောငျ့လိုးသမြှ ကော့ခံရငျး ဖီလငျတှေ အပွတျတကျကာ ကိုလတျညှနျသညျ့ဆီ မသှားသေးခငျ နောကျညတှတေိုငျး ဒီမှာ ဝအောငျ လာလာခံဦးမှဖွဈမညျဟု အတှေးနယျခဲ့နြမေိပါတော့သတညျး…..ပွီး။
အချိန်က ည ၉နာရီခွဲလုပြီ။ ရန်ကုန် မအူကုန်းရပ်ကွက်သည် နေ့လည်ဘက်တွင် လူစည်ကားသလောက် ညနက်လာလျှင် လူအသွား အလာက ပြတ်လာမြဲဖြစ်သည်။ ၁၂၃လမ်းထဲရှိ ‘ထွန်းတောက်’ ဆေးခန်းထဲတွင် ဒေါက်တာကိုလတ်တယောက်ထဲ စာထိုင်ဖတ်နေမိ၏။ မိုးဖွဲဖွဲရွာနေသည်မို့ ည၈နာရီကျော်လောက်ကတည်းက ဆေးခန်းကို လူနာမလာတော့ … ၉နာရီခွဲ ဆေးခန်းပိတ်ချိန်အထိတော့ လူနာ မလာလည်း မပြန်သေးပဲ ဆက်ထိုင်နေတတ်သည်က ကိုလတ် အကျင့်ဖြစ်နေပြီ။ စောသေးလျှင် ကားလမ်းပေါ်တွင်ကားတွေက ပြည့်ကြပ်နေတတ်သေးသည်မို့ ကားမောင်းရတာ မောင်းလို့မကောင်း။ .. ၉နာရီခွဲနှင့်ဆယ်နာရီကြားထဲလောက်ဆိုမှ ကားရှင်းပြီး မောင်းလို့ကောင်း၏ တခါတခါတော့လဲ လူနာမလာပါပဲ ထိုင်နေရတာ ပျင်းစရာကောင်းလှသည်။
အလုပ်မရှိတော့ စိတ်တွေကလဲ ဟိုရောက်ဒီရောက် … ။ ဒီနေ့တော့ ကိုလတ်စိတ်ထဲ ရွာမှငယ်ရည်းစား နီလာ့ကို ထူးထူးခြားခြားသတိရနေမိသည်။ .. သူကသာ သတိရနေမိတာပါ … နီလာကတော့ သူ့ကို စိတ်ကူးထဲတောင်ထည့်တော့မည်မဟုတ်မှန်းလဲ သူသိနေသည်။ ရည်းစားဖြစ်ပြီးလို့မှ တနှစ်မပြည့်သေးခင် နီလာ့အမေဆုံးပါးသွားတာ ကျောင်းတက်ရင်း သတင်းကြားလိုက်ရ၏။ .. စာမေးပွဲတွေနှင့်လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေသော ဆေးကျောင်းသားဘဝမို့ ချက်ခြင်းမပြန်နိုင်သေးပဲ အားပေးစကားတွေသာ လူကြုံပါးလိုက် စာထည့်လိုက် လုပ်နေခဲ့ရသည်။ .. ဟော ကျောင်းပိတ်ရက်ရောက် လို့ သူလဲ ရွာပြန်ရော သတင်းကောင်းက ဆီးကြိုနေပါတော့သည်။ .. နီလာတယောက် သူမ၏ပထွေး ကိုကျော်နှင့် အတိအလင်းယူလိုက်ကြပြီတဲ့ … ။ ကောင်းပါသည် .. ကောင်းကြပါပေသည်။ .. သွားလေသူ အမေ့မျက်နှာမှမထောက် .. ။
သူ့မျက်နှာလဲမထောက် … ဘယ်သူ့မျက်နှာမှမထောက် … လုပ်ပုံ လုပ်ပုံ၊ နီလာတို့လုပ်ချလိုက်ပုံက ကိုလတ်ဆလံသ သွားရသည်။ ရွာကိုလည်း အဲဒီကတည်းက ကိုလတ် လုံးဝမပြန်တော့။ ယိုသူက မရှက်ပေမယ့် မြင်သူက ရှက်သည်လေ .. ။ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်နာသည်ဆိုဆို ပထမဆုံးရည်းစားမို့ ကိုလတ် နီလာ့ကို မေ့မရသေး … ။ နီလာ့နှုတ်ခမ်းနွေးနွေးလေးတွေ … နို့အုံထွားထွားကြီးတွေ .. တင်သားအိအိကြီးတွေ .. အိုနောက်ဆုံးတော့ ဆွဲအားကောင်းလှသောစောက်ဖုတ်လေး … တခုမှ ကိုလတ်မေ့လို့ကိုမရ။ .. အင်း ဒါပေမယ့် ဒါတွေအားလုံးက ခုတော့ သူ့ပထွေးတဖြစ်လဲ လင်တော်မောင်ကြီး ကိုကျော့်အတွက် အသုံးတော်ခံစရာလေးတွေသာ ဖြစ်နေပေရော့မည် … တောက် … ။ ကိုလတ်တွေးရင်း ဒေါသထွက်လာသဖြင့် တောက်ပင်ခေါက်လိုက်မိသည်။ .. သူငယ်ချင်းတခိျု့ကတော့ပြောသည်၊ .. ကိုကျော့်မှာ သူ့ထက်ကောင်းကွက်တွေရှိနေလို့ဖြစ်မည်တဲ့ … ။
သူလဲ ဒါတွေအစက သိပ်တော့နားမလည် .. ဆေးကျောင်းသားပေမယ့် စာထဲသာစိတ်နှစ်ထားခဲ့သူမို့ ဒါတွေနှင့် နဲနဲစိမ်းသည်။ .. သို့ပေမယ့် ရည်းစားလူလုခံရပြီးနောက်တွင်တော့ ကိုလတ် မခံချင်စိတ်နှင့် ဒါတွေ လိုက်စားလာသည်။ လိင်တံကြီးထွားစေသော နည်းလမ်းများရှာသည်။ .. ဆေးထိုးတာတွေဘာတွေ ကတော့ ဘေးမကင်းမှန်း ဆရာဝန်လောင်းပီပီ သူသိသည်မို့ လက်တဲ့မစမ်းခဲ့။ .. ဘေးကင်းသော လေစုပ်ပြွန်တွေ ဘာတွေနှင့်တော့ စမ်းကြည့်သည်။ .. ရလဒ်က မဆိုးလှပါ။ သူ့ဆိုဒ်က ပိုကြီးလာသည်။ .. သန်မာမှုနှင့်သုတ်ထိန်းနိုင်အားလဲ ပိုကောင်းလာသည်။ နောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေ တိုင်ပင်ပြီး တယောက်ဟာပေါ်တယောက် ဂေါ်လီတွေ အပြန်အလှန်ထည့်ကြသည်။ .. သူလဲ သူ့လိင်တံ ကျောဘက်တွင် ဂေါ်လီ၂လုံးထည့်လိုက်သည်။ .. ပြောင်းဖူးစေ့တွေလို လျှောက်ထည့်နေလျှင်တော့ ဘေးလဲ မကင်းသလို ခံရသူလဲ လက်လန်သွားမည်မို့ မထည့်။
၂လုံးလောက်က အနေတော်ပါပဲ။ စိတ်နာနာနှင့် ကိုလတ် ရန်ကုန်တွင် ရည်းစားတွေ ထည်လဲထားပြစ်ခဲ့သည်။ ထားလိုက်သော ရည်းစားတိုင်းကလဲ သူ့ဟာကြီးနှင့် ဂေါ်လီလေးတွေကို တန်းတန်းစွဲ .. ။ အဲ တခုတော့ ရှိသည်။ .. ရည်းစားက ရည်းစားလိုမနေပဲ ယူဘို့အတင်းအကြပ်တိုက်တွန်းလာလျှင်တော့ ကိုလတ် တို့ ဝေးဝေးပြေးတော့သည်။ .. လူပျိုဘဝနှင့် ရသလောက်ကဲဦးမည်ဟု ကိုလတ် စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည်။ .. ဒါတွေအားလုံးကို နီလာ့အစား မိန်းမတွေအပေါ်လက်စားချေနေခြင်း တမျိုးဟု သူ ခံယူထားလိုက်သည် .. ဆိုင်သလား မဆိုင်သလားတော့ မသိ။ .. ဒီလိုနှင့် မနှစ်က သူ ဆရာဝန်ဖြစ်လာသည်။ .. အလုပ်နှင့်အကိုင်နှင့်ဆိုတော့ ကဲရတာ ပိုတင့်တယ်လာ၏ သူ့ကြောင့် အပျိုရည်ပျက်ခဲ့ရသူလေးတွေလဲ တော်တော်များနေပြီ။ နောက်ပြီးသားရေအိုင်တွေကို ခြေဝင်ဆေးခဲ့တာတွေလည်း မနဲလှတော့။ .. ဆရာဝန်ဆိုတော့ ရှောင်တတ်တိမ်းတတ်တာကော ကံကောင်းနေသေးတာကော ပါမည်ပေါ့လေ .. ကိုလတ်တို့ ခုထိတော့ ပိုက်ဘော မိသည့်ဘ၀ မရောက်သေး။
ကိုလတ်အလုပ်က ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း ဆေးရုံကြီးတွင်ဖြစ်သည်၊ .. ကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်းကိုတော့ လူနာအရများသည့် မအူကုန်းဘက်တွင် ဖွင့်ဖြစ်သည်။ လူပျိုလူလွတ် ဆရာဝန်ဆိုတော့ ဆေးခန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကိုလတ်နာမည်က ရေပန်းစားသည်။ .. ရှုပ်ပွေသူအဖြစ်လဲ နာမည်ထွက်သည်။ .. သို့ပေမယ့် မိန်းကလေးများထုံးစံအတိုင်း ရှုပ်သူပွေသူဟု နာမည်ကြီးသူတွေဆို ပိုကပ်တတ် ရောတတ်သည့် အတွက် ကိုလတ်ဘေးနားမှာ မိန်းကလေးတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေလေသည်။ .. ကိုလတ်ကတော့ အခွင့်သင့်လျှင် သင့်သလို အခြေအနေပေးလျှင် ပေးသလို စိတ်ကြိုက်ရာကို ဆွတ်ခူးစားသုံးရင်း လူပျိုဘဝကို ပျော်ပျော်ကြီး ဖြတ်သန်းနေလေတော့သည်။ ‘ ဝါး ဟား … ‘ အိပ်ငိုက်သလိုလိုဖြစ်လာသည်မို့ ကိုလတ် သန်းဝေလိုက်မိသည်။
လက်ပါတ်နာရီကို ငုံ့ကြည့်တော့ ကိုးနာရီခွဲလုပြီ။ .. လက်ထဲမှ ပလေးဘွိုင်းစာအုပ်ကို အသာခေါက်သိမ်းလိုက်ပြီး သိမ်းစရာရှိတာတွေ သိမ်းနှင့်ရန် ကိုလတ် ထလိုက်၏။ ပုဆိုးအောက်မှ ဖွားဘက်တော်က ပလေးဘွိုင်းစာအုပ်အရှိန်နှင့်တကြွကြွဖြစ်နေသည် ပုဆိုးဝတ်လျှင် အောက်ခံဘောင်းဘီဝတ်လေ့မရှိသော ကိုလတ်အကျင့်က တခါတခါတော်တော်ဒုက္ခပေး၏။ ခုလဲ ဖွားဘက်တော်ငြိမ်အောင် ခနစောင့်ရသေးသည်။ နို့မဟုတ် လူမြင်လို့မှ ကောင်းမည်မဟုတ်။ … ‘ ဆရာ .. ဆရာရှိသေးလားဟင် … ‘ ဆေးခန်းတံခါးတခြမ်းပိတ်ထားလိုက်ပြီး အတွင်းဘက်လူနာစမ်းသပ်ခန်းထဲဝင်ကာ နားကြပ်တွေဘာတွေ သိမ်းနေသော ကိုလတ်နားထဲသို့ ဆည်းလည်းသံလေးတခုတိုးဝင်လာသည်။ .. ပြန်မည်လုပ်ခါမှ လူနာက လာနေပြန်ပြီထင်သည်။
ကိုလတ် နဲနဲကျွဲမြီးတိုသွားရ၏။ တခါတခါကျ လူနာတွေက ဒီလိုပါပဲ .. ဆေးခန်းဖွင့်ထားချိန်တောက်လျှောက်ကျ လူရှုပ်သည်ဘာသည်ဆိုပြီး လာမပြကြ၊ ဆေးခန်းပိတ်ပြီး ပြန်တော့မည်ဆိုလျှင် တယောက်ပြီးတယောက် ရောက်ရောက်လာတတ်သည်။ ‘ ကိုးနာရီခွဲပြီဗျ .. ဆေးခန်းပိတ်တော့မလို့ … သြော် … မီမီ ပါလား .. ‘ ကိုလတ်ဘုတောသံက တဝက်တပျက်နှင့်ရပ်သွားရသည်။ ရေစိုနေသောထီးလေးကို ကိုင်ထားသည့် ချစ်စရာ မိန်းကလေးကို သူကောင်းကောင်းသိသည်ကိုး .. ။ လမ်းထိပ်နားမှ မီမီရယ်လေ .. မနှစ်ကမှ ယောကျာ်း ဆုံးထားသည့် ပူပူနွေးနွေး မုဆိုးမလေး မီမီ။ .. ‘ ဆောရီးနော် ဆရာ … ဆရာနဲ့ သေသေချာချာတိုင်ပင်ချင်လို့ ဆေးခန်းလူရှင်းချိန်ကျမှ ရွေးပြီးလာခဲ့တာ၊ အနှောက်အယှက်ပေးမိသလိုများ ဖြစ်သွားပြီလားမသိဘူး .. အားနာလိုက်တာ .. ‘ မီမီက မျက်လုံးလေး ပုတ်ကလပ်ပုတ်ကလပ်လုပ်ရင်း တောင်းပန်နေသည်။ .. ခွင့်လွှတ်ပေးရမှာပေါ့လေ။ .. ဒီလောက်လှသည့် မုဆိုးမလေးပဲဟာ .. ။ ‘ ရပါတယ် မီမီရယ် … ပြောနေရမယ့်သူတွေမှ မဟုတ်တာ … ကဲပြော .. ကျနော်ဘာကူညီရမလဲ ‘ ကိုလတ်လေသံပြောင်းသွားတော့မှ မီမီ အားတက်သွားရသည်။
နောက်နေ့မှလာလို့များ ပြောလွှတ်လေမလားဟု ဆေးခန်းအလာတလျှောက်လုံး တွေးပူနေခဲ့ရသည်လေ။ .. လက်ထဲမှ မိုးရေစိုနေသောခေါက်ထီးလေးကို ထီးထည့်သည့်ပုံးထဲ မီမီထည့်လိုက်၏။ ဘေးဘီကို စိတ်မလုံ သလို အသာအကဲခပ်သည်။ ‘ စိတ်ချသာ ပြောပါ မီမီ … ဒီနေ့ အကူကောင်လေးမလာလို့ ကျနော်တယောက်ထဲရှိတာ .. ‘ ကိုလတ်က မီမီ့အနေအထားကို အကဲခပ်မိသဖြင့် ရှင်းပြလိုက်ရ၏။ ခါတိုင်းဆို ကောင်လေးနှင့် ကိုလတ် အတူပြန်ပြီး လမ်းကျမှ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်တွင် ချပေးနေကြ။ ဒီနေ့တော့ ကောင်လေး သွားစရာရှိလို့ ခွင့်တိုင်ထားသည်မို့ သူတယောက်တည်းသာ .. ။ ကိုလတ်စကားကြောင့် မီမီ သက်ပြင်းလေး အသာချလိုက်သည်။ ရှက်ရွံ့ဟန်နှင့် မျက်လွှာလေးချလိုက်ရင်း တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်သည်။
‘ ဒီ .. ဒီလိုပါဆရာ … မီမီ သွေးမပေါ်တာ ၂လရှိနေပြီ အဲဒါ .. အဲဒါ .. ‘ ကျန်းကျန်းမာမာ တောင့်တောင့်တင်းတင်းနှင့် ချစ်စဖွယ် လင်သေမုဆိုးမလေး .. သွေးထိန်နေတာကို ရှက်ရှက်နှင့်ပြောနေပြီဆိုမှတော့ တခြားဘာများဖြစ်နိုင်ဦးမှာတဲ့လဲ .. ခိုးစားတာ လူမိလေပြီပေါ့။ ဘာပဲပြောပြော တခြားဖြစ်နိုင်ခြေတွေလဲ ရှိသေးသည်မို့ ကိုလတ် တာဝန်အရ ရှင်းပြရလေသည်။ ‘ တခါတခါ ဒီလိုပဲ သွေးထိန်တတ်တာပဲ မီမီရဲ့ .. ‘ မီမီမျက်နှာလေး ရဲတက်လာသည်။ .. သက်ပြင်းတချက်ကို ရှိုက်လိုက်ရင်း မပွင့်တပွင့်လေး ပြောလာပြန် လေ၏။ ‘ မဟုတ်ဖူးဆရာ .. မီမီက သွေးသိပ်မှန်တာ။ .. ရက်တောင် လွဲလေ့မရှိဘူး။ ခုဟာက .. ခုဟာက .. ‘ ‘ ရပြီ .. ဒီလောက်ဆို ဆရာနားလည်ပြီ .. ။ ကဲပြော .. မီမီဘာဖြစ်ချင်လဲ .. ‘ ‘ သွေးပေါ်ဆေးတွေဘာတွေ ထိုးပေးလို့ မရဘူးလား ဆရာ … ‘ ကိုလတ် ခေါင်းကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းခါမိသည်။ အပြင်လူတွေကြားထဲမှာ သွေးပေါ်ဆေး သွေးပေါ်ဆေးနှင့် လူသိများလှသော ထိုးဆေးတွေက တကယ်တော့ ကိုယ်ဝန်ရှိတာသာဆိုလျှင် ဘာမှ မတတ်နိုင်။
လူအများက နားလည်မှုတွေ လွဲနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ‘ သွေးပေါ်ဆေးက ကိုယ်ဝန်မရှိပဲ တခြားအကြောင်းကြောင့် သွေးထိန်နေတာမျိုးမှ စွမ်းတာ မီမီရဲ့ .. ‘ ကိုလတ်စကားကြောင့် မီမီ နီးရာခုံတခုပေါ် စိတ်ပျက်လက်ပျက် ထိုင်ချလိုက်မိသည်။ ‘ အဲဒါမှ ခက်တော့တာပါပဲ ဆရာရယ် … ခုဟာက ကိုယ်ဝန်ရှိတာလို့ မီမီတော့ထင်တာပဲ .. ဟင်း .. ‘ မီမီဝတ်ထားသည်က လည်ပင်းတော်တော်ဟိုက်သော တီရှပ်လက်တိုကလေး .. ။ ကိုလတ်ရှေ့တည့်တည့်တွင် ထိုင်ချလိုက်တော့ လည်ဟိုက်ကြားမှ ရင်နှစ်မွှာကွဲကြောင်းလေးက မျက်စိထဲကို ထင်းကနဲ ဝင်လာသည်။ အသာမိုးကြည့်လိုက်တော့ နို့အုံအပေါ်ပိုင်းလေးတွေကိုပင် မြင်နေရ၏။ စောစော တုန်းက ပလေးဘွိုင်းဖတ်ထားသော အရှိန်က မသေသေးသည်မို့ ကိုလတ်သွေးတွေ ဆူလာသည်။ ‘ မီမီတကယ်တမ်းလိုအပ်မယ်ဆိုရင် တောင်ဥက္ကလာဘက်မှာ ကျနော့်အသိ ဆရာဝန်မတယောက်ရှိပါတယ်။
ဒါမျိုးတွေကို ကူညီနေကြလေ .. ခက်တာက .. ‘ ‘ ခက်တာက ဘာလဲဟင် ဆရာရယ် .. လုပ်ပါဦး .. မီမီ ဆရာ့ကို အားကိုးပါတယ်ရှင် .. ‘ ‘ ခက်တာက ဒါဟာ တကယ်ကိုယ်ဝန်ရှိတာ ဟုတ်မဟုတ် သေချာအောင် လုပ်ရဦးမယ် မီမီရဲ့ .. ‘ ‘ ဆီးစစ်ကြည့်ရမှာလား ဆရာ … ‘ ကိုလတ် အသာပြုံးလိုက်မိသည်။ သူဆင်သော အကွက်ထဲတော့ မီမီတယောက် ဝင်လာလေပြီ။ .. ‘ ဆီးစစ်တာက မသေချာလှသေးဘူး မီမီရဲ့ .. သေချာချင်ရင် အတွင်းပိုင်း စမ်းသပ်ကြည့်ရမှာ ….. ‘ ‘ အို … ‘ မီမီ့မျက်နှာလေး ရဲတွတ်သွားသည်။ ခေါင်းလေးက ငုံ့ကျသွားရ၏။ ကိုလတ်က ဟန်ကိုယ့်ဘို့ ဆိုသလို အသာ မှင်နှင့်မောင်းနှင့် ဆက်ပြောလိုက်ပြန်၏။ ‘ မီမီရှက်နေရင် နောက်နေ့မှ မိန်းကလေးဖော်တယောက်ယောက်ခေါ်လာပြီး စမ်းလေ .. ။
ဒါမှမဟုတ် လေဒီဒေါက်တာ တယောက်ယောက်ကိုပဲ သွားပြချင် ပြပါလား .. ‘ ပြောမယ့်သာပြောလိုက်ရသည်၊ မီမီ သူပြောသလို တကယ်သဘောတူသွားရင် အခက် ဟု ကိုလတ်တွေးနေ မိလေ၏။ .. မုန့်က ပါးစပ်နားရောက်နေပြီမို့ မစားလိုက်ရလျှင်တော့ ကိုလတ်တို့ ရာဇဝင်ရိုင်းရော့မည်။ ကိုလတ် ဆုတောင်းပြည့်သည်ပြောရမည်။ မီမီက ခနစဉ်းစားသလိုလေးလုပ်နေပြီးမှ သက်ပြင်းလေးတချက် ချရင်း စိတ်ကို ဒုံးဒုံးချလိုက်လေ၏။ ‘ မထူးပါဘူး ဆရာရယ် … ။ ဒါနဲ့ပဲ ရက်တွေ သိပ်ကြာသွားဦးမယ်။ … ဆရာပဲ စမ်းပေးပါတော့ … ‘ ကိုလတ် တံတွေးကို အသာမြိုလိုက်မိသည်။ စားရကံတော့ ကြုံလေပြီ။ ‘ ကဲကဲ .. လာ။ ဒါဆိုလဲ အခန်းထဲသွားရအောင် … သြော် … တံခါးကြီးတော့ ပိတ်ခဲ့မယ်နော် … တော်ကြာ စမ်းနေတုန်း သူများတွေ ရုတ်တရက် ဝင်လာမှာစိုးလို့ … ‘ မီမီ့အတွက် ရတက်မအေးဟန်နှင့် ကိုလတ်က ဆေးခန်းအဝင်တံခါးကို တဝက်ပိတ်ထားရာမှ အကုန်ပိတ် ပစ်လိုက်သည်။
ထို့နောက်တော့ နုနုထွားထွား မုဆိုးမလေးကို ဦးဆောင်ကာ အတွင်းဘက် လူနာစမ်းသပ် ခန်းထဲ ဝင်လာလိုက်တော့၏။ မီမီက ခေါင်းလေးငုံ့ရင်း ဆင်မယဉ်သာ ဟန်လေးနှင့် ကိုလတ်နောက်က လိုက်လာသည်။ အတွင်းခန်းသို့ရောက်လေပြီ။ ‘ ကဲ .. မီမီ တက် ‘ ကိုလတ်က ပြောလဲပြော မီမီ့လက်လေးကိုလဲ အသာဆွဲကာ ကုတင်ပေါ်တက်ခိုင်းလိုက်သည်။ မီမီ့လက်ဖျား လေးတွေ အေးစက်နေတာ သတိထားမိလိုက်၏။ ကုတင်က အနည်းငယ်မြင့်သည်မို့ မီမီက တဖက်စောင်းကာ လက်လေးနှင့်ထောက်ပြီးတက်ရသည်။ ခြေဖျားလေးတွေက အောက်မှ ခုထားသော ခုံလေးပေါ်ထောက်ပြီး တင်ပါးကို တစောင်းလှမ်းတင်လိုက်ရ၏ ကိုလတ်က သူ့ဘက်သို့လှည့်ကာ ကုန်းပြပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားသော မီမီ့တင်ပါးကြီးတွေကို အားမနာတမ်း အနီးကပ်ကြည့်ပြစ်လိုက်သည်။ စောစောက မနဲချိုးနှိမ်ထားရသော ဖွားဘက်တော်က ရုန်းထလာသည်။ .. ခုတင်စောင်းနှင့် မနဲဖိထားလိုက်ရသည်။ ‘ ဟင်း … ‘ ကုတင်ပေါ်ရောက်ပြီးသည်နှင့် မီမီက မျက်လုံးလေးများ အသာမှိတ်ကာ သက်ပြင်းလေးတချက် မှုတ်ထုတ် လိုက်ပြန်၏။
ကိုလတ် အတတ်သိလိုက်ပြီ … ဒီကောင်မလေးလဲ စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေပြီ။ … ဟန်ကိုယ့်ဘို့ ဆိုသလို တရှိန်ရှိန်တက်နေသော စိတ်ကို အသာချိုးနှိမ်ယင်း လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်း သွေးပေါင်အရင် ချိန်ပေးလိုက်၏။ .. ဒါတောင် လူကနေပေမယ့် လက်က မနေ။ .. သွေးပေါင်ချိန်ကရိယာ ပြန်အဖြုတ်တွင် ကိုလတ်လက်တွေက မီမီ့နို့ကြီးတွေကို မထိတထိ ပွတ်သွားလိုက်သေးသည်။ မီမီ မသိမသာလေး တွန့်သွားတာ .. ခြေဖျားလေးတွေ ကုပ်ကွေးသွားတာ ကိုလတ် သတိထားမိသည်။ မီမီ့တကိုယ်လုံးက ကုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက်လေးမို့ ရှိုက်ကြီးဖိုငယ်အသွယ်သွယ်က မကြည့်ချင် မြင်လျက်သား ဆိုသလို ဖြစ်နေရလေသည်။ .. ကိုလတ်ကတော့ ကြည့်ချင်ချင်ကြီးနှင့်ကို ကြည့်နေခြင်းပါ။ ‘ ကဲ … မီမီရေ … စမ်းကြစို့နော် … မရှက်နဲ့ သိလား … ‘ အာတွေခြောက်တက်လာသည်မို့ ကိုလတ် တံတွေးကို ခနခန မြိုချနေရ၏။
ဒီစကားလေး ပြောထွက်လာဖို့ မနဲကို အရှိန်ယူလိုက်ရသည်။ မီမီကတော့ ဘာစကားမှတောင် ပြန်မပြောနိုင်ရှာ။ … ခေါင်းလေးသာ အနိုင်နိုင် ညိတ်ပြလိုက်ရသည်။ ကိုလတ်က မီမီ့ထမီအထက်ဆင်စလေးကို အသာဖြုတ်သည်။ … မီမီက ဗိုက်လေးရှပ်ပေးထားပြီး ကိုလတ် ဖြုတ်ရလွယ်အောင် ကူညီပေးနေ၏။ လူကတော့ မလှုပ် … မျက်စိလဲ စုံမှိတ်ထားသည်။ .. အထက်ဆင်စလေး ပြုတ်သွားလေပြီ။ .. ကိုလတ်က အစက မီမီဝတ်ထားတာ ရိုးရိုးထမီထင်နေမိသည်။ .. အခု ထက်ဆင်ဖြုတ်လိုက်မှ ခါးတွင်အထက်ဆင်စ ချည်ပြီး ဝတ်ရသော စကပ်ထမီမှန်း သိရသည်။ ဟန်ကျသည်ပေါ့ … အထက်ဆင်စ ဖြည်လိုက်သည်နှင့် ခါးအကွဲစလေးက ဟထွက်သွားသည်။ .. ဒါပေမယ့် မီမီ့တင်ပါးကြီးတွေက ဖွံ့ထွားလှသည်မို့ လွယ်လွယ်နှင့်တော့ စကပ်ထမီလေးက အောက်လျှောချလို့ မရ။
‘ မီမီ … တင်ပါးလေး နဲနဲ ကြွပေးဦးနော် … ‘ ကိုလတ်အသံက အဝေးတနေရာမှ လာနေသလို မီမီ့နားထဲ ခံစားနေရ၏။ စိတ်ညှို့ခံနေရသူလို မီမီဘာမှကို ပြန်မပြောနိုင်။ .. သူပြောသလို ခါးလေးကို အသာပင့်ကာ သာ တင်ပါးကြီးတွေကို ကြွပေးလိုက်မိရသည်။ ကိုလတ်က အလိုက်သင့်ဆိုသလိုပင် စကပ်ထမီလေးကို အောက်ဖက် တဖြည်းဖြည်း ဆွဲချလိုက်၏။ ဆေးခန်းလာပြရသည်မို့လားမသိ .. ။ မီမီ့တွင် အောက်ခံ ဘာမှ မဝတ်ထားပါ။ .. ကိုလတ်က စကပ်ထမီလေးကို ဆွဲချလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် မီမီ့ ရတနာလေးက ဝင့်ကြွားစွာ ဝင်းဝင်းပပ ထွက်ပေါ်လာပါတော့သည်။ မဂိုသွေးပါသူမို့လားမသိ … မီမီက အမွှေးအမျှင်တွေ ပြောင်နေအောင်ကို ရိတ်ထားသည်။
မဖြူမညိုအသားလေးနှင့် လိုက်လျှောညီထွေစွာပင် မီမီ့ဆီးခုံလေးက မို့မောက်တက်နေ၏။ .. ပေါင်တံထိပ်ဖျားတွေကတော့ အပြင်အသားအရေထက်ကို ပိုပြီး ဖြူဝင်းတောက်ပနေသည်။ … ပြည့်ပြည့်တင်းတင်း နှုတ်ခမ်းသားနှစ်လွှာ အတွင်းဝယ် သာမာန်မိန်းကလေးတွေထက် သိသိသာသာကြီးကို ပိုကြီးသော အစေ့လေးက ပြူးထွက်နေ၏ … ။ ကိုလတ်ကို မျက်စပစ်ပြ နေသလိုလို .. ။ ကိုလတ်က လက်အိတ်စွပ်လိုက်သည်။ … အမှန်က ဒါမျိုးစမ်းမည်ဆိုလျှင် ပိုးသတ်ထားသော ရာဘာလက်အိတ် အထူကို စွပ်ရမည်။ သို့ပေမယ့် ကိုလတ်က အကြံကြီးနှင့်မို့ ရိုးရိုး သွေးဖောက်တာတွေ ဘာတွေမှာသုံးသည့် ရာဘာလက်အိတ်အပါးလေးပဲ စွပ်လိုက်၏။ မီမီကတော့ ဘာမှ မသိရှာ … ။ ကိုလတ်ပြုသမျှ နုတော့မည့်ပုံနှင့် ပျော့ပျော့ကျော့ကျော့လေး လှဲနေလေသည်။ ကိုလတ်က မီမီ့ပေါင်ကြားထဲသို့ သူ့ညာဘက်လက်ကြီးကို သွင်းလိုက်၏။ ဘယ်လက်ကတော့ မီမီ့ခါးကို အသာလှမ်းကိုင်ထားသည်။ မီမီက အလိုက်သင့်ပင် ပေါင်ကြီးတွေကို ကားပေးလိုက်သည်။
စောစောက ဒူးလောက်ရောက်အောင် ဆွဲချထားသော စကပ်ထမီလေးက မီမီ ပေါင်ကားပေးလိုက်မှုကြောင့် အောက်သို့ တွန်းချလိုက်သလိုဖြစ်ကာ ခြေဖျားထိလျှောကျသွားတော့၏။ ကိုလတ် အသက်ကိုမှန်အောင် မနဲထိမ်းရှုယင်း မီမီ့ စောက်ဖုတ်လေးထဲ လက်ညှိုးကို စထိုးသွင်းလိုက်၏ အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်လျှင် လက်ညှိုးလက်ခလယ်နှစ်ချောင်းပူးနှင့် စမ်းရမြဲဖြစ်သော်လည်း မီမီ့စောက်ဖုတ်လေးက အပျိုနှင့်မခြား တင်းကြပ်စိရိနေသည်မို့ တချောင်းထဲနှင့်ပဲ အရင် သွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါတောင်မှ ကိုလတ်လက်ညှိုးက ပုဇွန်ကျစ်စာတွင်းထဲ ထိုးထည့်ရသည့်အလား စီးပိုင်တင်းကြပ်နေသည်။ … ‘ အ …. ‘ မီမီ့နှုတ်မှ မပွင့်တပွင့် အသံလေး ပွင့်အံထွက်လာ၏။ ကိုယ်လုံးလေးလဲ ဆတ်ကနဲ တုန်သွားသည်။ .. ခါးလေးက မသိမသာ ကော့တက်လာကာ ပေါင်တံကြီးတွေက ပိုကားထွက်သွားသည်။ ‘ မီမီ နာသွားလို့လားဟင် … ‘ ကိုလတ်က အမှန်အကန်စမ်းသလို မစမ်းပဲ လက်ညှိုးကို အတွင်းထဲတွင် ပတ်လည်လှည့်ကလိပေးနေရင်း မသိဟန်ဆောင်ကာ မေးလိုက်၏။
ခါးလေးကို ထိန်းကိုင်ပေးထားသော ဘယ်လက်ကလဲ မသိသလိုလိုနှင့် အောက်ဖက်လျှောဆင်းလာပြီး မီမီ့တင်သား ထွားထွားအိအိကြီးတွေကို အသာဖြစ်ညှစ်ဆုပ်နယ်လာသည်။ အထိအတွေ့က ထူးလှ၏။ .. ကိုလတ် စိတ်ရိုင်းတွေ ပိုဆင်လာသည်။ ‘ နာရင်ပြောနော် … အားမနာနဲ့သိလား … ‘ ပါးစပ်ကသာ တွေ့ကရာတွေလျှောက်ပြောနေသော်လည်း ကိုလတ် လက်တွေက စနစ်တကျ လှုပ်ရှားလာပြီ၊ လက်ညှိုးတချောင်းထဲထိုးသွင်းထားရာမှ လက်ခလယ်ကိုပါ စစ်ကူယူလာသည်။ နှစ်ချောင်းပူးဖြင့် မီမီ့စောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးသွင်းလာသည်။ .. မီမီ့စောက်ဖုတ်လေးကလဲ အရည်တွေ စိုရွှဲထွက်လာပြီမို့ ကိုလတ်လက်နှစ်ချောင်းပူးကို မဖြုံတော့ပေ။
ကိုလတ်က အပီပင် လက်တဆုံးထိုးသွင်းလိုက် .. ပါတ်လည်လှည့်ကာ မွှေနှောက်ပေးလိုက် .. ဘေးနံရံလေးတွေကို တဆတ်ဆတ်ထိုးဆွလိုက် .. သားအိမ်ခေါင်းနေရာလေးကို ဖိထိုးလိုက် လုပ်ပေးနေသည်။ မီမီ တဆတ်ဆတ်တုန်လေပြီ … ကိုလတ် ဘာလုပ်နေပြီမှန်းလဲ ရိပ်မိပြီ။ .. သို့ပေမယ့် ဘာမှလဲ မပြောသာ .. မရုန်းသာ .. ။ သူမကိုယ်တိုင်လဲ အသွေးထဲအသားထဲက ကာမဇောတွေ တရှိန်ရှိန် တက်နေရလေပြီကိုး .. ။ ‘ အား ဟာ့ဟာ့ …. ဆရာ ဆရာ ရယ် … ‘ ကိုလတ်က လက်ညှိုးလက်ခလယ်ပူးကို အဆုံးထိုးသွင်းဖိထားရင်း လက်မက အဝမှ အစေ့လေးကို ဆွပေးလိုက်တော့ မီမီ မနေနိုင်တော့။ .. အသံတွေပင်ထွက်လာရတော့သည်။
ခုနက ခပ်ပျော့ပျော့လေး လှဲနေရာမှ ခုတော့ ခြေဖဝါးတွေ ခုတင်ပေါ်အပြားလိုက်ချကာ တင်ပါးကြီးတခုလုံး တထွာနီးပါး မြောက်တက် လာသည်အထိကို ကော့တင်ပေးနေတော့သည်။ ‘ မီမီ ခံလို့ကောင်းလားဟင် … ‘ ကိုလတ်က ဗြောင်ပင် မေးလာတော့သည်။ .. အပွဲပွဲနွှဲခဲ့ဘူးပြီဖြစ်သော သူရဲကောင်းမို့ ဒီတပွဲလဲ သူကောင်းကောင်းကြီး အောင်နိုင်သူဖြစ်ပြီမှန်း ဗေဒင်မေးစရာမလိုပဲ ကိုလတ် အတတ်သိနေလေပြီကိုး … ။ ‘ ကောင်းတယ် ဆရာရယ် … ဘယ်လိုကြီးမှန်းကို မသိဘူး … အားရှီး …. ‘ တော်ယုံမိန်းကလေးဆို ဒီလောက်နှင့် စကားမေးမရတတ်သေး။ … မသကာ ခေါင်းလေးညိမ့်ပြယုံလောက်ပဲ ရှိမည်။ .. မီမီကတော့ မုဆိုးမလေးလဲဖြစ်ပြန် .. ကာမဇောလဲ ထန်လှသူမို့ ရှက်တာတွေ ကြောက်တာတွေ ခနနှင့် လွင့်စင်ပျောက်ကွယ်သွားလေပြီ။
ကိုလတ်က ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးကို ပြုံးလိုက်၏။ .. ရေကန်အသင့် ကြာအတင့်ဆိုသလိုပင် အပြင်တွင်လဲ မိုးက သည်းသည်းမည်းမည်းရွာလာပြန်သည်။ … အပြင်ကလူတွေ ရောက်လာစရာမမြင်တော့။ .. ရောက်လာလဲ ပိတ်ထားသော ဆေးခန်းတံခါးကိုကြည့်ပြီး ဆရာဝန်ပြန်သွားပြီပဲမှတ်ကြမည်။ ကိုလတ်၏ ကားက ဆေးခန်းအဝတွင်မရပ်ပဲ ရပ်ရန်လွယ်သော လမ်းထိပ်နားက မြေကွက်လွတ်ကြီးရှေ့တွင် ရပ်ထား ခြင်းဖြစ်ရာ နောက်ကြောင်းက အကုန်ရှင်းနေလေပြီ။ .. ‘ အမယ်လေးလေး … ဆရာ ဆရာရယ် … ဘယ်လိုများလုပ်လိုက်တာလဲရှင် .. အား ဟားဟား အူး … ‘ ကိုလတ်က ဂျီစပေါ့တ် ဟုခေါ်သည့် ဆီးအိမ်အောက်နား စောက်ဖုတ်ရှေ့ဘက်နံရံကို အတင်းထိုးဖိကာ ဆွပေးလိုက်တော့ မီမီ ထွန့်ထွန့်လူးသွားရတော့သည်။ … အရည်တွေလဲ ပွက်ခနဲကို ထွက်ကျလာရာ ကိုလတ် လက်အိတ်ပေါ်မှာပင် ရွှဲအိုင်သွားရသည်။ … ပြီးရှာလေပြီပေါ့ တချီ .. မီမီလေးရယ် ။
ကော့တင်ပေးထားသော မီမီ့တင်ပါးကြီးတွေက စမ်းသပ်ခုတင်လေးပေါ် ဝုန်းကနဲ ပြန်ပစ်ချလိုက်သလို ကျသွားသည်။ .. မီမီခေါင်းလေးကို တဖက်စောင်းကာ အသက်ကို မှန်မှန်ပြန်ရှုနေရ၏။ ဖွံ့ထွားသော မီမီ့နို့ကြီးတွေက နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်နှင့် လှိုင်းထနေရသည်။ ကိုလတ်ကတော့ ဒါကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး အရသာခံကြည့်နေလိုက်သည်။ စောက်ဖုတ်လေးထဲမှ လက်ကိုတော့ မထုတ်သေး … မီမီ့စောက်ဖုတ်လေးက ရှုံ့လိုက်ပွလိုက်နှင့် ကိုလတ်လက်ချောင်းတွေကို ညှစ်နေဆဲရှိသေးသည်။ ခနနေတော့ ကိုလတ် ရှေ့တဆင့်တက်ရန် ခြေလှမ်းပြင်လိုက်၏။ မီမီ့ကိုယ်လေးကို ခုတင်အောက်ဖက်ဇောင်းရောက်အောင် အသာဆွဲချလိုက်သည်။ .. မီမီက မျက်လုံးလေး အသာမှေးကာ လှမ်းကြည့်သည်။ .. ဘာမှတော့ မပြော၊ .. ရုန်းတာကန်တာတွေလဲ မလုပ်။ မီမီ့တင်ပါးကြီးတွေ ခုတင်အောက်ဖက်ဇောင်းပေါ်တင်မိတော့ ကိုလတ်က ခုတင်စောင်းမှာ မှီပြီးရပ်လိုက်သည်။
မီမီ့ ပေါင်တံကြီးနှစ်ချောင်းကို တစ်တီတူးထောင်လို အပေါ်မြှောက်တင်လိုက်၏။ … တချိန်တည်းမှာ ကိုလတ်လုံချည်ကလဲ ကွင်းလုံးကျွတ်သွားပြီ။ .. ကျောဘက်တွင် မျက်လုံးလေးနှစ်လုံးလို ဖုထွက်နေသော ဂေါ်လီလေးနှစ်လုံးနှင့် ကိုလတ် လိင်တံကြီးက အမဲသားနံ့ရနေသော ကျားကြီးလို အာသာငမ်းငမ်း ထွက်ပေါ်လာလေတော့၏။ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသောကြောင့် မီမီ့တင်သားကြီးတွေကို ထိုးမိထောက်မိဖြစ်နေသည်။ မီမီကတော့ အံတင်းတင်းကြိတ်ကာ ခုတင်ဘေးစောင်းတွေကို သူမလက်လေးတွေက ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင် ထားလေ၏။ ကိုလတ် ရှေ့တဆင့်တက်လာမှာကို အသင့်ကြိုလင့်နေသည့်အလား … ။ ကိုလတ်က ချက်ခြင်းရှေ့မဆက်သေး …။ လက်အိတ်ကို ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။ … မီမီ့အရည်တွေက လက်အိတ်ပေါ်တွင် ရွှဲအိုင်သွားသည်ဖြစ်ရာ လက်အိတ်အထဲမှ ကိုလတ်လက်ပင် အစိုပြန်ကာ နူးအိနေရသည်။
နူးအိကာ အစိုပြန်နေသော ကိုလတ်လက်နွေးနွေးကြီးတွေက မီမီ့ တီရှပ်လေးပေါ်မှ အုပ်ကာ ရွှေရင်ဖြိုးဖြိုး တွေကို အုပ်ကိုင်လာတော့သည်။ မီမီ ပါးစပ်လေး ဟ သွားကာ ပင့်သက်ရှိုက်သွားမိရ၏။ ‘ အမေ့ … ‘ အောက်ဖက်တွင်သာ ကိုလတ် ပွဲကြမ်းလိမ့်မည်ဟု ထင်ထားမိနေချိန်တွင် မမျှော်လင့်ပဲ အပေါ်ပိုင်းကို တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရသဖြင့် အငိုက်မိသွားသော စစ်သည်တဦး ပမာ မီမီ အမေပင် တလိုက်မိရသည်။ ကိုလတ်လက်ကြီးတွေအပေါ်မှ သူမလက်လေးနှင့် ကပျာကယာ အုပ်ကိုင်လိုက်မိသည်။ ကိုလတ်ကတော့ မီမီ့နို့အုံအိအိထွားထွားကြီးတွေကို မညှာမတာပင် ဆုပ်ကိုင်ညှစ်နယ်လေတော့၏။ တီရှပ်လေးပင် ပြဲသွားတော့မလား အောက်မေ့ရသည်။
မီမီ နာလဲနာသည် … ခံလို့လဲ ကောင်းလှသည်။ .. ကိုလတ်လက်ကြီးတွေပေါ်အုပ်ကိုင်ထားသော သူမ၏ လက်လေးတွေက ပထမတော့ ကိုလတ်လက်ကြီးတွေကို ဆွဲဖယ်မလိုလိုနှင့် နောက်တော့ မသိမသာ ကူညီ ဖိပေးနေမိလျှက်သားဖြစ်သွားရသည်။ .. ကိုလတ်ကတော့ သူ့လက်အားကော မီမီ ဖိပေးနေသည့်အားကိုပါ ယူကာ အပီကို ပွဲကြမ်းပြစ်လိုက်လေတော့သည်။ ‘ အား … ရှီး … ဟင်း ဟင်း … ‘ အဖျားတက်နေသော လူမမာပမာ မီမီ့နှုတ်မှညဉ်းသံလေးတွေ တရစပ်ထွက်လာသည်။ ရင်ဘတ်လေးကလဲ ကော့တက်လာသည်။ .. မီမီဝတ်ထားသော တီရှပ်လေးက ပါးပါးလေးနှင့် လည်ကလဲ တော်တော်ဟိုက်သည်ဖြစ်ရာ ကိုလတ်ခုလို အပီပွဲကြမ်းနေတော့ နို့အုံကြီးတွေက လည်ဟိုက်အပေါက်လေးထဲမှပင် လျှံထွက်လာတော့မလိုဖြစ်နေရ လေ၏။ အတွင်းမှ ဘရာစီယာလေးကလဲ ရင်ပုံခွက်တခြား နို့တခြားဖြစ်နေလေပြီ။
ကိုလတ်က ဒါကိုပင် အားမရလေဟန်နှင့် မီမီ့ တီရှပ်လေးကို ခါးအောက်စမှ ကိုင်ကာ အတင်းလှန်ချွတ်၏။ မီမီက လက်လေးနှစ်ဖက်မြှောက်ပေးကာ ကိုလတ်ချွတ်ရလွယ်အောင် ကူညီပေးသည်။ … တီရှပ်လေးကျွတ် သွားပြီးတော့ ဘရာစီယာကိုတော့ ကိုလတ်က အချိန်ကုန်ခံကာ ချွတ်မနေတော့။ .. နို့အုံတွေအောက်မှ ဆွဲလှန်ကာ မတင်လိုက်တော့သည်။ … ဘော်လီမဟုတ်သည့်အတွက် ဒီလို မတင်လိုက်သည်နှင့်ပင် လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်သွားကာ နို့နှစ်လုံးက အပြိုင်ပြူးထွက်လာသည်။ မုဆိုးမလေးပေမယ့် ကလေး မမွေးဘူးသေးသည်မို့ မီမီ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေက အပျိုလေးတွေလိုပင် နီနီရဲရဲလေးတွေဖြစ်၏။ .. ရာဂစိတ်မွှန်နေချိန်မို့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေက ချွန်ကော့စူတက်နေသည်။ … ကိုလတ်က မီမီ့ရင်ဘတ်ပေါ်ခေါင်းတခုလုံးမှောက်ချကာ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ငုံစုပ်ကာစို့လိုက်၏။ ‘ ပြွတ် ပြွတ် … အင်း ဟား …. ‘ မီမီ ကော့လန်တက်သွားသည်။
ကိုလတ်ခေါင်းကြီးကိုလဲ လက်နှစ်ဖက်နှင့်အတင်းဖိကာ သူမရင်ဘတ်ပေါ်ဖိတွန်းထားလိုက်မိ၏။ ကိုလတ်ကတော့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုစို့ရာမှ နို့အုံသားကြီးတွေပါ ပါးစပ်ထဲဝင်နိုင်သမျှ ဝင်သည်အထိ အာကို အားရပါးရဖြဲကာ စုပ်သွင်းနေပြန်သည်။ .. မီမီ့နို့ကြီးတွေ သွေးချည်ဥကုန်ပြီလားပင် ထင်ရသည်။ အာခေါင်ထဲဝင်လာသော နို့အုံသား နူးနူးညံ့ညံ့လေးတွေကိုလဲ သွားနှင့် မနာ့တနာ ကိုက်ခြစ်ပေးနေပြန်၏ နို့စို့နေရင်းမှ ကိုလတ် လက်ကလဲ အအားမနေ။ .. အောက်ဖက်ကိုလှမ်းပြီး မီမီ့ဆီးခုံလေးပေါ်ပွတ်သပ်ရင်း အစေ့လေးကို လက်ညှိုးလက်မနှင့် ဖိညှပ်ဆော့ကစားပေးနေသေးသည်။ ‘ အင့် ဟင့်ဟင့် … တော်ပါတော့ ဆရာရယ် … လိုးမှာဖြင့်လဲ လိုးပါတော့ … မီမီခံရခက်လှပြီ .. ‘ ဒီလိုပဲ ဖြစ်လာရမည်လေ။ … အနှူးအနှပ်တော်သည့် ယောကျာ်းမျိုးနှင့်တွေ့လျှင် အဘယ်မိန်းကလေးမဆို ဒီလိုပဲ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် တောင်းဆိုလာရပေမည်ပေါ့။ .. ခုလဲ ကိုလတ် မီမီ့ကို အပိုင်ချည်နှောင်လိုက်ပြီလေ။
မီမီ့တောင်းပန်သံဆုံးသည်နှင့် ကိုလတ် မီမီ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှ ခေါင်းပြန်ကြွလိုက်သည်။ နောက်သို့ အနည်းငယ်ပြန်ဆုတ်ပြီး နေရာယူသည်။ .. ဂေါ်လီလေးနှစ်လုံးနှင့် ပနံတင့်နေသော သူ့လိင်တံကြီးကို လက်နှင့်ကိုင်ကာ တဆဆလုပ်ရင်း မီမီ့ဆီးခုံလေးပေါ်ကို ဖတ်ကနဲဖတ်ကနဲ သုံးလေးချက် ရိုက်ပေးလိုက်သည်။ .. ‘ အာ့ အာ့ ….. ‘ မီမီဖျတ်ဖျတ်လူးသွားရရှာသည်။ ကိုလတ်ဟာကြီးက သူမအစေ့လေးကိုပင် လာရိုက်မိသဖြင့် ပြီးလုလုပင် ဖြစ်သွားရပြန်သည်။ ကိုလတ်သာ နောက်ထပ် ဆက်ရိုက်ပေးနေလျှင် တကယ်ပင် ပြီးသွားလောက်သည်။ သို့ပေမယ့် ကိုလတ်က ဆက်မရိုက်တော့ .. ။ သူ့ဟာကြီးကိုသာ လက်နှင့်အသာထိန်းကိုင်ကာ မီမီ့စောက်ဖုတ်လေးထဲ တေ့သွင်းလိုက်တော့သည်။ ‘ ရှီး … အား လားလား … ‘ လိင်တံကြီးကျောဘက်မှ ဂေါ်လီလေးနှစ်လုံးက မီမီ့ ဂျီစပေါ့တ်ကို ကျကျနန ဖိနှိပ်ပွတ်တိုက်သွားသည်။
ရေထဲမှ ကုန်းပေါ်သို့ ဆွဲတင်ခံလိုက်ရသော ငါးကလေးလို မီမီ ပါးစပ်လေးဟကာ အသက်ငင်သလို ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက်လေး ဖြစ်သွားရလေ၏။ … တကိုယ်လုံးလဲ တုန်တက်သွားသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ကိုလတ်လီးချောင်းကြီးတခုလုံးက အတွင်းထဲထိ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အတင်းဖြဲကာ ထိုးဝင်လာတော့သည်။ အဆုံးရောက်တော့ သားအိမ်ခေါင်းလေးကို ဒုတ် ကနဲ တိုက်မိသွားသည်။ … မီမီမှာ ကိုယ်ဝန် ၂လရှိနေသည်မို့ အတွင်းသားလေးတွေ သားအိမ်ခေါင်းလေးတွေက နုဖတ်နေသည်။ မိန်းကလေးများ ဒီအချိန်တွင် လိုးလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်၏။ လိုးဖူးသူမှ ဒါကိုသိကြမည်။ .. ကိုလတ်ကတော့ အတွေ့အကြုံစုံနေပြီမို့ ဒါကို ကောင်းကောင်းသိသည်။ .. သိသည့်အတိုင်းလဲ သေသေချာချာကို ခံစားကာ လိုးလေတော့သည်။
မျက်စိတွေကိုပင် မှေးထားကာ မီမီ့ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားလေးတွေ၏ အထိအတွေ့ကို အပီအပြင် ခံယူနေသည်။ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် မဆောင့်ပဲ ဖြည်းဖြည်းလေး သာသာလေး ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက် .. စိမ်ပြီးနှပ်ထားလိုက် လုပ်နေသည်။ … ကိုလတ် က ဒီလိုလုပ်နေလေ မီမီကတော့ အာသာမပြေစွာနှင့် ဖျတ်ဖျတ်လူးလာလေပါပဲ။ … ကိုလတ်ရဲ့ထိချက်တွေများ ပိုပြင်းလာလိုလာလေငြားနှင့် အောက်ကနေ သူမဖင်ဆုံကြီးကို အစွမ်းကုန် ကော့ပင့်ဆောင့်မြှောက်ပေးနေသည်။ .. ကိုလတ်သိသည်၊ .. မီမီ ဘယ်လိုမှ အဆာမပြေဖြစ်နေရပြီ။ .. အမှန်ကတော့ စောက်ဖုတ် အတွင်းသားလေးများ၏ နူးညံ့သည့်အထိအတွေ့ကို ဆက်ခံစားနေချင်သေးသော်လည်း မီမီ့အလိုကိုဖြည့်ပေးဘို့ကလည်း တာဝန်ရှိသေးသည်မို့ ကိုလတ် ဗျူဟာပြောင်းလိုက်ရသည်။
မီမီ့ဖင်ဆုံကြီးအောက်သို့ လက်လျှိုကာ တင်သားအိအိကြီးများကို လက်နှင့်ကျကျနန ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ ထို့နောက် မီမီ့ခြေနှစ်ချောင်းကို သူ့ပုခုံးပေါ်ထမ်းလိုက်ကာ ခါးအားကော တကိုယ်လုံးအားပါထုတ်သုံးပြီး ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ချပေးလိုက်လေတော့သည်။ … ‘ ဖုံး ဖုံး … ဖုံးဖုံး … အ အ .. အ အ … ‘ မီမီတယောက် ခုမှပဲ အာသာပြေတော့သည်။ .. ကိုလတ်ဆောင့်လိုက်တိုင်း စမ်းသပ်ခုတင်လေးက တအိအိလှုပ်ခါနေသလို မီမီ့တကိုယ်လုံး အထူးသဖြင့် နို့ကြီးတွေက ရမ်းခါနေရသည်။ .. ကိုလတ်က မကြည့်ရက်ဟန်နှင့် မီမီ့ နို့ကြီးတွေကို လက်နှင့်အသာ လှမ်းကိုင်ကာ ထိန်းထားပေးလိုက်တော့ မီမီ့လက်က ကိုလတ်လက်ကြီးတွေပေါ်ထပ်ကိုင်ရင်း အတင်းပဲ ဖိညှစ်နေသည်။ ဒီတော့လဲ ကိုလတ်လဲ မနေသာတော့ ..။
အသားကုန်ဆောင့်ကျုံးရင်းမှ လက်တွေကပါ နို့ကြီးတွေကို ဖြစ်ညှစ်ဆုပ်နယ်ပေးနေမိရတော့သည်။ … နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ မီမီ့တကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်တုန်တက်လာကာ စောက်ဖုတ်လေးထဲမှ အရည်တွေ ဒလဟော ပန်းထွက်သွားရပြန်သည်။ … နောက်တချီ ပေါ့ … ။ မီမီ ပြီးသွားပြန်ပြီမှန်း သိတော့ ကိုလတ်က ဆောင့်ချက်တွေကို နှေးပေးလိုက်သည်။ မီမီ့ ကျိန်းစပ်နေသော အတွင်းသားလေးတွေကို ခံသာနိုင်ယုံ ခပ်သာသာလေး ဆက်ဆောင့်ပေးနေရင်း ခုမှ စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့ဖြစ်တော့၏။ ‘ ဆရာလုပ်ပေးတာ ခံလို့ကောင်းလားဟင် … မီမီ … ‘ မီမီက နှုတ်ခမ်းလေး စူလိုက်သည်။ မျက်စောင်းလေးပါ ထိုးပစ်လိုက်၏။ ‘ တော်ပါ .. လူကို စမ်းသပ်မယ်လေး ဘာလေးနဲ့ ညာပြီး လုပ်တယ် … ဟင်း ဆရာ လူလည်ကြီး ..
‘ ‘ အို … ဒါ စမ်းသပ်တာ မီမီ ရဲ့ .. သိဖြင့်မသိပဲနဲ့ .. ‘ ‘ တော်ပါ … စကားတတ်တိုင်း … ‘ ‘ အဟုတ်ပြောတာ … ကိုယ်ဝန်ရှိကာစ မိန်းကလေးတွေမှာ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေကြောင့် အတွင်းသားလေးတွေက နဂိုကနဲ့မတူပဲ အရမ်းနုသွားတာ … ဒါကို ဆရာက အာရုံခံကြည့်တာလေ .. ‘ ‘ ပြောပါ … ပြောပါ … သူပဲပြောပါတော့ … ‘ ‘ သြော် … မယုံရင်လဲနေ။ … ခုဆို မီမီ့မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေတာ ဆရာသိပြီ … ‘ ‘ ရှင် ….. တကယ် …. ‘ ဒါတော့ မီမီ တကယ်ထိတ်လန့် သွားရသည်။ ‘ တကယ်ပေါ့ … အထဲမှာ နူးအိနေတာပဲ။ ဒါမျိုးဖီလင်ကို ရိုးရိုးမိန်းကလေးတွေမှာ ဘယ်လိုမှ မရဘူး .. ‘ ‘ ဟယ် … ဒါဆိုရင်တော့ ခက်တာပါပဲ ဆရာရယ် … မီမီကိုယ်ဝန်ရှိလို့မဖြစ်ဖူး … အလိုလိုကမှ ဘိုင်ကြီး အမျိုးတွေက မီမီ့ဆို အပြစ်ပြောချင်နေကြတာ .. ‘ ဘိုင်ကြီး ဆိုတာက မနှစ်က ဆုံးသွားသော မီမီ့ယောကျာ်း ဘူတားကြီးကို ဆိုလိုမှန်း ကိုလတ်သိသည်။
အနှီ ဘူတားကြီးဆုံးသွားတော့ မီမီ့အတွက် ကျန်ခဲ့သော အမွေအနှစ်တွေက နဲတာမှ မဟုတ်တာလေ။ … အမျိုးတွေ လက်ညှိုးထိုးချင်နေကြမည်ပေါ့။ … ဒါမျိုးက ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ‘ ဆိုပါဦး …. လက်သည်က ဘယ်သူလဲ ။ တယောက်ထဲကော ကရဲ့လား … ‘ ကိုလတ် မေးခွန်းက ရိုက်ပေါက် … ။ မီမီ သူ့ကို စွဲပြီမှန်းသိလို့သာ မေးရဲတာ။ … ‘ အောင်မယ် .. အောင်မယ် ဆရာနော် … လူကိုများ ဖင်လျှောက်ဆော့နေတဲ့ အစားထဲကမှတ်လို့လား .. တယောက်ထဲရှင့် … အိမ်က ကားတွေကို ဝယ်ရောင်းလုပ်ပေးနေတဲ့ ရာရှစ်နဲ့ … ‘ မီမီ့ဆီမှာ ဘိုင်ကြီး ထားသွားသည့် ကား သုံး/လေးစီးရှိပြီး အဲဒါတွေကို ဝယ်ရောင်းလုပ်တာနှင့်ပင် ဝင်ငွေ ဖြောင့်နေမှန်း ကိုလတ် ကြားဘူးသည်။ … သြော် .. စီးပွားရေးအတွက် စိတ်ချရအောင် လူယုံမွေးတာကိုး။
ရာရှစ်ကို ကိုလတ် မျက်မှန်းတန်းမိသည် … ဒီကောင် ကံကောင်းလေစွ။ … ‘ ဘယ်နှစ်ချီလောက် ရှိနေကြပြီလဲ … နေ့တိုင်းပဲလား … ‘ မီမီက ခံနေရင်းမှ ကိုယ်လေးကြွကာ ကိုလတ်ရင်ဘတ်ကြီးကို လက်သီးဆုပ်လေးနှင့် လှမ်းထုသည်။ ‘ ပြောလေကဲလေဖြစ်နေပြီ … ဘယ်ကလာ နေ့တိုင်းရမှာလဲရှင့် … ဟိုတလောလေးကမှ တခါနှစ်ခါကြုံမိတာ … ကံများ မကောင်းချင်တော့ သွေးက တန်းကို ထိမ်သွားတော့တာ .. သိပြီလား ကဲ ‘ ကိုလတ် ပြုံးသွားရသည်။ … ဒါဆို သူလဲ ကံထူးရှင်ပဲပေါ့။ .. ‘ ကဲပါ … ဆရာလုပ်နေတာနဲ့ စကားတောင် ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိဘူး … မီမီ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ .. ‘ ‘ အင်း …….. ‘ ကိုလတ်က စဉ်းစားနေဟန်နှင့် ခန တွေနေသည်။ … ဒီ မုဆိုးမလေးကို စိတ်ချရသည့်ဆီ လွှတ်မှဖြစ်မည်။ မလုပ်ပေးပဲ ထားလို့လဲမဖြစ်။ … ဗိုက်ကြီးလာလို့ ပြသနာရှုပ်လာလျှင် သူလဲ ပါနေပြီမဟုတ်လား။ ….. တော်ကြာ ငါးတကာ ယိုသည့်ချေး ပုဇွန်ခေါင်းလာစုနေမှာမျိုးတော့ ကိုလတ် အဖြစ်မခံနိုင် .. ။ ‘ ဒီလိုလုပ်လေ မီမီ ရဲ့ … တောင်ဥက္ကလာက မေတ္တာလမ်းကို သိတယ်မဟုတ်လား …
‘ ‘ အင်း သိတယ် … ‘ မီမီက အသာမှိန်းခံနေရင်း ခေါင်းလေးညိမ့်သည်။ ကိုလတ်ကလဲ စကားသာပြောနေတာ ခပ်မှန်မှန်ဆောင့် ပေးနေတာကိုတော့ အပျက်မခံ .. ။ ‘ အဲဒီလမ်းပေါ်မှာ မြင်သာဘက်ရောက်ခါနီးကျရင် ကာတော်လိပ်ဆေးရုံဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးဆေးရုံ ရှိတယ်လေ … ‘ ‘ ဟယ် … အစိုးရဆေးရုံက ဒါတွေ လုပ်ပေးတယ်လား … ‘ ‘ အာ ….. မဟုတ်ပါဘူး။ စကားကို ဆုံးအောင်နားထောင်ပါဦးလေ … အဲဒီဆေးရုံဟိုဘက်ကို ဘတ်စ်ကား ၂မှတ်တိုင်လောက်ကျော်လိုက်ရင် အဝေရာ ဆေးခန်းဆိုတာ ရှိတယ် .. ထိုင်တာက လေဒီဒေါက်တာ …. ဆရာဝန်မ … ‘ ‘ အဲဒီတော့ … ‘ ‘ အဲဒီတော့ … မီမီ အဲဒီကိုသွားလိုက်ပေါ့။ .. ဆရာ လွှဲစာရေးပေးလိုက်မယ်။ ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်လုပ်တာ ဆိုတော့ ပိုးဝင်မှာတွေ ဘာတွေ စိတ်ပူစရာမလိုဘူး။ … စိတ်ချရတယ် … ‘ ‘ ဆေးရုံတွေဘာတွေများ တက်နေရဦးမှာလား ဆရာရယ် …..
‘ ‘ မလိုပါဘူး မီမီရဲ့ … မနက်သွား .. နေ့လည်ပြီးပြီ …. လိုအပ်ရင်နောက်ရက်တွေ ထပ်ခေါ်လိမ့်မယ် … ဟိုရောက်ရင် မီမီတွေ့ပါလိမ့်မဗျား … ဟော့တ်ရှော့တ်လေးတွေ ဝင်လာမစဲ တသဲသဲ ဖြစ်နေကြတာ .. ‘ မီမီက ကိုလတ် ဗိုက်ခေါက်ကြီးကိုလှမ်းလိမ်ဆွဲလိုက်သည်။ ‘ ဟင်း … ဆရာက ဒါတွေ ကျွမ်းနေပြီပေါ့လေ … ‘ ‘ သြော် .. ဒီလိုပဲ လေ့လာထားရတာပေါ့ …. ဒါမှ သူငယ်ချင်းတွေဘာတွေ ကြုံရင် လမ်းညွှန်နိုင်မှာလေ ‘ ‘ တော်ပါ … ယုံမယ် အားကြီးကြီး … ကဲ … မပြီးနိုင်သေးဘူးလား … မီမီတောင် နောက်တခါ ပြီးချင်လာပြီ … ထိန်းနိုင်တာကလဲ လွန်ရောပဲ … ။ ချတာချပြီးရင် လွှဲစာလဲ ရေးပေးဦး … ဟွန်း ‘ မီမီက မူနွဲ့နွဲ့လေး ပြောသည်။
ချစ်စရာဟန်လေးတွေကို ကြည့်ပြီး ကိုလတ် နှမြောနေမိ၏။ နောက်ဆို သူမက သူ့ဆီ လာကုန်းချင်မှ ကုန်းတော့မှာလေ။ .. ‘ ဖြည်းဖြည်းပေါ့ မီမီရယ် … နောက် ၂ရက်/၃ရက်နေမှ ဆရာရေးပေးမယ် … ‘ ‘ ဟယ် … အဲဒါနဲ့ပဲ ရက်တွေကြာကုန်ပြီး လုပ်ရခက်တော့မှာပဲ … ဘာဖြစ်လို့တုန်း ဆရာရဲ့ … ‘ ‘ စိတ်မပူပါနဲ့ မီမီရဲ့ … ခုမှ ၂လရှိသေးတာဟုတ်လား။ .. ၃လလောက်အထိကတော့ အဲဒီ အမ က အေးအေးဆေးဆေးပဲ … ‘ ‘ ခုရေးပေးလိုက်လဲ ပြီးရော ဆရာရယ် ….. အလကား အရစ်ရှည်နေတယ် … ‘ ‘ အို … ခုရေးပေးလိုက်လို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ မီမီရဲ့ … ‘ ‘ ဘာလို့ …. ‘ ‘ ဒါမျိုးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာက ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျသလိုပဲလေ … လုပ်ပြီးရင် ၄၅ရက်တော့ ရှောင်ရမှာ … ‘ ‘ ဟင် … အဲဒါနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ …
‘ ‘ ဆိုင်ပါသော်ကောကွယ် …. ဟောဒီက ဆရာက မီမီလေးကို လုပ်လို့ဖြုတ်လို့ မဝသေးဘူးဗျ … ထပ်လိုးချင် သေးတယ် … သိပြီလား … ‘ ‘ ဟယ် … ကြည့်စမ်း ကြည့်စမ်း … အပြောရဲလိုက်တာ … သူ့ကိုများ ဘယ်သူက ခံဦးမယ် ပြောနေလို့လဲ’ မီမီ မျက်နှာလေး နီရဲသွားသည်။ .. ‘ မပြောလဲ သိပါတယ်ကွယ် … ဆရာ့ဟာကြီးကို မီမီစွဲသွားပြီမဟုတ်လား … ‘ ‘ ဟွန်း … သူပဲ အပြောကောင်း … အ အ … အင့်အင့် … ‘ မီမီက မျက်လုံးလေးဒေါင့်ကပ်ပြီး ချစ်စဖွယ်ပြောလိုက်ရာ ကိုလတ်ရင်ထဲ ကလိကလိဖြစ်သွားပြီး ကာမအားတွေ အဆမတန်တိုးလာကာ စကားဆက်မပြောတော့ပဲ အဆက်မပြတ် ခပ်ကြမ်းကြမ်းပြန်ဆောင့်လိုး လေတော့သည်။ မီမီလဲ ကိုလတ်ဆောင့်လိုးသမျှ ကော့ခံရင်း ဖီလင်တွေ အပြတ်တက်ကာ ကိုလတ်ညွှန်သည့်ဆီ မသွားသေးခင် နောက်ညတွေတိုင်း ဒီမှာ ဝအောင် လာလာခံဦးမှဖြစ်မည်ဟု အတွေးနယ်ချဲ့နေမိပါတော့သတည်း…..ပြီး။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အတှကွေုံ့စုံ